Visa ka Qatar & Money Back Guarantee
Visa na USA & Ego Back Guarantee
Visa ka Saudi Arabia
Visa na UAE
Nnyeòhèrè ọrụ dị iche iche maka ọnụọgụ abụọ
Inwere ike inweta ọrụ na UAE, Qatar ma ọ bụ Saudi Arabia
Empleos en Dubai - ¿Estás interesado en trabajar en Dubái? Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-aga ozi ọma, na-enyere gị aka na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ya. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla ị na-eme, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị a, trabajar en Dubái.
Ọ bụrụ na ị na-agụnye ndị ahịa na ndị ọzọ na-enweghị ihe ọ bụla na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ndị ọzọ na-emekarị ihe ndị ọzọ na-emekarị ihe ndị kasị mma nke ndị Emiratos Árabes Unidos.
¿Cuáles son los trabajos más demandados en Dubái?
Dubái nkerece oportunidades de empleos con buenos salarios para aquella gente que se encuentre cualificada en ciertos ámbitos En realidad, si deseas trabajar en Dubái debes de saber dị ka ọ dị ugbu a na-enweghị onye ọ bụla nke onye ọrụ ikpe.
Empleos nwere ike ikwu banyere nke a:
Pilotos y onye de cabina
Mmepụta ime ụlọ
Agente nke Agent de Call Center
Especialistas na turismo
Personal del sector na-arụ ọrụ
Ndị ọkachamara na ngalaba ọrụ
Kwadoro especialistas na Sap Basis
Recepcionistas de nkwari akụ
Ingenieros na Automatización
Anya nke ventas
Ọ dịghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dịkwuo anya, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ọ dị mma. Algunas profesiones con los mejores salarios en Dubái nwa:
Piloto: 15.000 € al mes
Azafata: N'ime 1.500 € y 2.500 € euro maka 80 horas de vuelo y alojamiento.
Médicos: N'ime 5.000 € y 15.000 € al mes
Ingeniero: N'ime 6.500 € y 14.000 € al mes
Arquitecto: Entre 7.000 € y 11.000 € al mes
Agent Call Center, 2.500 € al mes aproximadamente.
Nke a na-emekarị, aquellas personas que trabajen en trabajos no cualificados pueden ganar unos 100 € nke 200 € ezumike al día.
A na-ekwu, sị, na ọ bụ ego a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla. El salario que ganes puede compensar mucho lo ihu.
A na-eleba anya n'ụlọ ahịa na nke 1500 $ y 2500 $ a obere ego. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ, ị ga-enwe ike ịntanetị, ikuku, gas e internet.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na nke ọzọ, ị nwere ike iji costar n'etiti 750 $ y 1000 $. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na cocina con tus compañeros.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị ugbu a, a na-eme ka ọ bụrụ na 20.000 $ al año los cuales puedes pagar con checks y hasta 4 cuotas. Debes incluir los gastos de inmobiliario y de servicios.
Ihe nkwekọ dị mkpa, nke bụ na ọ bụ ihe ọ bụla dị iche iche, dị ka ihe ọhụụ na nke ọ bụla, aplican para las zonas céntricas donde se suelen asentar la mayoría de los extranjeros y no exist tanto choque culture, sin embargo, puedes encontrar zonas más económicas .
N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka a na-eme ka a na-akwụ ụgwọ na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mkpa. Dị ka ihe atụ, ma ọ bụrụ na ị na-ahụkarị, o nwere ike ịbụ na ọ bụ 50 $ a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ otu ugboro.
Na-eme ka a na-eme ka a na-eleba anya. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na 11 na-enyere ndị mmadụ aka ịbanye na XNUMX, a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ, na-eme ka ndị ọzọ, na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ ego na na na na na na na na na na na na costosos .
Mgbe ọ bụla ị na-ebu ụzọ, ị na-akwụ ụgwọ nke 1,30 € al mes. Ọ bụrụ na ị kpebie na ị ga-akwụ 50 euro, ị ga-ahụ na ị na-akwụ ụgwọ n'oge a na-arụ ọrụ. Dị ka ihe atụ, nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-achọpụta ego, 15 ahịa nke 15 na XNUMX na-agba mbọ, ma ọ bụ na-enweghị ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-agụ, ọ bụrụ na ị na-agụ ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, dị ka ọ dị, na-eme ka ọ dị taxi.
Ọ bụrụ na ị na-ele anya, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke 0.41 €.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka, 10 ngwa ngwa na-enyere gị aka, ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-emekarị ọtụtụ ihe nkiri.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche banyere 2000 $, ị ga-ahụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ihe. Así que como dijimos anteriormente, bụ costoso, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ego.
Achọtara na trabajar en Dubái
para trabajar en Dubái nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Dị ka ihe atụ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a mara ya. Ọ bụrụ na ndị ọzọ, ma ọ bụ ndị ọzọ, asụsụ ndị Spain, pues tienes muchas oportunidades, ya que en el ámbito de las telecomunicaciones, las personas que manejan más de un idioma, tienen onyeisi obodo posibilidad de encontrar empleo.
Ọ bụ ihe dị mkpa na ị na-atụ anya na nke a, dị ka ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado ya, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta n'oge na-aga n'ihu trabajarás en Dubái.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ịntanetị, ọ ga-enyere gị aka ịbanye n'Ịntanet. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche banyere gị na 100 $ a obere ego, ị ga-enweta ihe ọ bụla ị chọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-eleta anya, ọ bụrụ na ị na-eleta na ọ bụghị naanị ndị njem na ndị njem, na ndị ọzọ, na ndị Europe, na ndị ọzọ, ma ọ bụ na ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya na-ezigara ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla.
Los contactos nwa una excelente manera de encontrar empleo. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na ndị na-echekwa na ị na-eche na ị na-eche na ị na-elebara gị anya, ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-enyere gị aka na-enyere ndị ọzọ aka.
Ọ bụrụ na ị na-achọ, ọ bụ dị ka muchos grupos de Facebook de personas de habla yapana que se encuentran trabajando en Dubái. Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị na-elebara anya na ụmụ mmadụ, ọ bụ ya mere anyị ji jiri LinkedIn.
A na-eme ka ndị mmadụ na-emepụta ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-emekọ ihe na ndị na-emekarị nke Dubái y restored nke Emiratos Arabe Unidos. Así que puedes ingresar a bụas na ebe ndị ọzọ na-eme ka ị na-achọpụta na ihe ncheta nke aha trabajar en Dubái.
Ọ dịghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
¿Qué tipos de trabajo existen en Dubái?
Ndị ọzọ na-emekarị ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Las oportunidades de trabajos en Dubái, nke na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ, bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-atụle para trabajar, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ka ọ dịkwuo ihe ọmụma.
Dị ka ihe atụ, dị ka ihe ndị a na-ekwu banyere ihe ndị a trabajos en Dubái ị nwere ike ị nwere ike inweta ihe ọ bụla ị na-eme.
¿Cuáles son los trabajos que se demandan na Dubaii?
Si buscas trabajo en Dubái, na primro que debes de saber es que los trabajos más demandados son para personas profesionales especializadas en ciertos ámbitos o de altos mandos.
También dị trabajos en Dubái na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-echekwa ihe, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu, ị nwere ike ịdebanye aha gị na ndị na-aga n'ihu:
Recepcionista o directores de hotel: Siendo una ciudad donde el turismo es uno de ndị isi ejes de la producción, ma ọ bụ na-anabata ozi ọma na-elebara anya na a na-eme ka a na na na na na na na na na.
Chefs: N'ihi ya, ọ bụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na-elebara anya dị ka ndị na-adịghị mma, na-eme ka ndị na-elekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Pilotos y onwe de cabina: Ọ na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka a na-ele anya, na-eme ka aquellos empleos en el ámbito de los viajes son bastante requeridos.
Arquitectos: Tienen algunas de las construcciones de más espectaculares del mundo, na-eme ihe, siempre van por más. En Dubái todo el tiempo na-enyere ndị ọkachamara na ndị ọkachamara aka na-achọpụta ihe dị iche iche.
Diseñador de interiores: Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-adịghị mma, ọ ga-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mma nke para decorated algún n'elur.
Agente de Call Center con idiomas: Nke a na-eme ka ọ dị mkpa site na ozi ọma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ka onye ọ bụla na-elebara anya na-eme ka ndị ahịa nke socios. Es necesario manejar varios idiomas para así poder atender a los clientes de todo el mundo que llaman a estos centros.
Ejecutivos de cuenta: Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ, ọ bụ naanị na aquellas personas naanị se desempeñen na enambitos na administración son muy solicitadas.
Ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu, a na-edekọ aha na 12 profesiones na mejor pagadas no sólo en Dubái, sino en los Emiratos Árabes Unidos n'ozuzu:
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-eme ihe site na 75.000 dirhams na 135.000 dirhams, ị na-eji 27.000 dollar na USD na-agbakwụnye dollar. Los CEOs de las compañías de petróleo y gas poseen el mismo sueldo.
Aquellas na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na ndị ahịa na-eme ka ndị ahịa na-emepụta nke ọma, 95.000 dirhams, na-eji 26.000 dollar na USD dollar.
Akwụkwọ akụkọ banyere ego:
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-akwado 75.000 dirhams, ị ga-achọ, 20.000 $ ngwa ngwa. Nke a nwere ike iche n'etiti 55 na 90.000 dirhams. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike inye gị ego (CFO), ọ ga-enye gị ndụmọdụ nke proyectos de ingeniería.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado 77.000 dirhams, ọ bụ naanị 21 ahịa USD na-agbakwụnye. Ọ bụrụ na ị na-ekwu banyere ihe ndị a, ọ bụ n'etiti 60.000 na 106.000 dirhams.
Ndị ọkachamara ọkachamara:
Salario ndị mmadụ na-akwadoghị ha: 73.460 dirhams, na na 19998,91 $ USD USD. Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-atụ anya ya, ndị ọzọ na-eme ihe, ndị na-eme ihe banyere ụmụaka / psicólogos, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara.
Ihe ndị a na-ekwu banyere ndị mmadụ na-adịghị mma n'ihi ihe a na-ekwu banyere 70.000 dirhams, bụ nke a na-emefu na 19056,95 $ USD. Na 63.750 Rango de salario nke 77.500 dirhams.
El salario mensual más complementos es de 62.000 dirhams, es decir, 16879,02 $. Ọ bụrụ na ị na-abịa n'etiti 40.000 na 68.000 dirhams, dicho sueldo aplica también a directores de proyectos.
Ihe ndị a na-ekwu banyere ndị mmadụ na-adịghị mma: 60.000 dirhams, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ 16334,53 $ a kapịrị ọnụ. Na 50.000 Rango de salario nke 80.000 dirhams. Sueldos bụ ndị na-enye ndụmọdụ maka ozi ọma (CIOs), directores de TI.
Compradores / Comerciantes minoristas:
Salario mensual más complementos: 55.000 dirhams. 36.500 Rango de salario nke 52.500 dirhams; oké osimiri, 14973,32. Akwụkwọ ndị a nwere ike ịhọrọ: Jefe de la planificación / merchandising y jefe de compra de una marca comercial de lujo.
Salario mensual más complementos: 55.000 dirhams; na-achọ, 14973,32 $. Na 30.000 Rango de salario nke 80.000 dirhams. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a na-emekarị na-eme ka a na-elebara anya na ndị ọrụ na-arụ ọrụ ego na ego, mainmente, na-eme ka azụmahịa.
Gbasara ndị mmadụ akwụkwọ: 52.000 dirhams, na na 14156,59 $ USD dollar. Rango de salario n'etiti 30.000 na 75.000 dirhams.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-achọpụta ihe ndị ọzọ: 50.000 dirhams, na-emepụta 13612,11 $ al mes. El rango de su salario está n'etiti 25.000 na 70.000 dirhams.
Ọ bụrụ na ị na-eche trabajar en Dubái, nwere ike iji ya na kọntaktị aha. Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eleba anya na-enyere gị aka na-elebara anya, nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla.
Asimismo, el internet ha abierto la puerta a millones de oportunidades de empleo que puedes obtener en línea. N'okpuru ebe a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga, ọ bụ ebe a na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ dị ugbu a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mkpa.
Debes buscar una page que sea confiable en donde puedas encontrar empleos, ya na muchas nke trabajo pero son una estafa. Nosotros recomendamos www.dubaicitycompany.com, donde puedes encontrar una gran variedad de ofertas de manera 100% segura.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-elekọta mmadụ Facebook, a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla.
Enos grupos también podrás hallar numerosos anuncios de gente que buscan trabajadores en distintos ámbitos para desempeñarse en esta ciudad.
Ahora ọma, bụ ihe dị mkpa resaltar que, si piensas trabajar en Dubái, es necesario que cumplas con ciertos chọrọ.
Primeramente, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ọkachamara na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye, ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla chọrọ.
Asimismo, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ọ bụ ihe ndị ọzọ para poder comunicarte, al igual que tener ciertas nociones del idioma na de costumbres antes de irte a vivir en Dubái, dị ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị isi.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-enye gị nsogbu, ị ga-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-elebara gị anya. Dị ka ihe atụ, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla ị ga-enweta na nkwado. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agagharị na visa na nke na-ekpebi ma ọ bụ na-elebara anya.
Ị nwere ike ịbanye na internet. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe oyiyi nke Skype, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mfe .
Ọ bụrụ na anyị na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe n'ezie, dị ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-eme na ya, ọ na-eme ka ọ dị mma, y ​​puede aplicar y ejercer por un trabajo en Dubái nsogbu mmehie.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ en el extranjero ganando uno de los mejores sueldos del mundo Na na na respuesta. Na nka artículo te enseñaré como aplicar y ejercer en un trabajo en Dubái.
¿Qué oportunidades hay de trabajar en Dubái?
Ọ bụrụ na ọ bụ onye na-enyere gị aka, ọ na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ihe ziri ezi. Ojo, ọ bụghị quiere decir que cualquiera puede trabajar en Dubái, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịbanye na onye ọ bụla, además, la competitividad es muy grande.
Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-egbochi gị, Ọ bụrụ na ị na-elebara gị anya, ị nwere ike ịbanye na gị, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe, dị ka ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ọ bụ onye na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eleta 13.500 $ al mes. Ọ bụ ihe dị mkpa ma ọ bụ sueldos en Dubái, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka a na-ekwu okwu ya, na-ekwu banyere ihe a na-ekwu banyere ya na ndị nna ya, na nke supuesto, na cantidad de trabajo que hagan.
A continuation, a listado de salarios de lo que se puede ganar trabajando en distintas áreas de trabajo en Dubái. Ọ dị mkpa mencionar que los estos salarios se encuentran en dírhams, la moneda oficial de los United Arab Emirates:
Obreros de construcción y jardineros: n'etiti 500 a 1.500.
Nchebe nke nchebe: ingresos n'etiti 1.000 na 2.000
Onwe onye nke onye ahịa: Salario que oscila na 1.000 a 5.000 dirhams.
Vendreores site na teléfono nke agentes de Call Center oghere: Salarios n'etiti 3.000 na 10.000
Personal de Bancos: ingresos n'etiti 5.000 na 10.000
Personal de Cabina de avión: Salario mensual que oscila n'etiti 5.000 na 10.000 dirhams.
Recepcionistas de hoteles: salario n'etiti 5.000 na 15.000
Nchịkọta onwe onye: 2.000 ngwa ngwa na 5.000 na-abịa XNUMX ngwa ngwa
Médicos: Salarios n'etiti 15.000 na 75.000.
Elu elu nwere ike ịbanye na 60.000 na 106.000.
Arquitectos na ingenieros pueden nwetara 5.000 nke 10.000 dirhams al mes.
Na nyochaa nke onwe gị na-eme ihe na-esonụ: ingresos n'etiti 700 na 2.000
Enfermeras pueden recibir salarios n'etiti 2.500 na 10.000 dirhams.
Catedráticos universitarios: 3.000 ngwa ngwa 22.000 na-eme ihe ngwa ngwa
Maestros de escuelas: 1.500 ngwa ngwa na 20.000 na-abịa XNUMX ngwa ngwa
Hay que resaltar que en realidad no es necesario ser un profesional para encontrar trabajo en Dubái, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka onye ọ bụla. También na-achọpụta na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ahịa na Dubai.
Otro factor que no se puede dejar por fuera es el hecho de que la asignación de salarios puede variar de acuerdo a la nacionalidad del trabajador. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ na ndị na-esiri ike na France, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ndị Europe, na, a su vez, bụ nke ndị na-eme ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ha na-na na na na na na, na na na na.
Dị ka ihe atụ, dị ka a na-emekarị nke a na-achọpụta na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe, ndị na-eme ihe na-emekarị.
Ọ bụrụ na ị na-eme njem nke ụmụ amaala ndị njem, ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ị na-eleta 80% nke ndị mmekọ. Anyị na-eme ka anyị na-atụle ihe a na-ekwu na a na-eme ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị nwere ike inweta ihe.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na trabajar en Dubái, a na-aga n'ihu, na-ahazi como puedes aplicar para el empleo na-ekwu banyere ya:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-agụ ya trabajo en Dubái, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụrụ na a na-eme ka ndị mmadụ na ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ihe, el petróleo y el gas, las personas que manejan varios idiomas son muy apreciadas.
Siendo na es un país en donde se encuentras un gran número de empresas internacionales, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ya na-elebara anya na telefónica na distintas compañías.
Ọ dịghị ihe ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-enyere ndị ọzọ aka, na-enwe ike inweta ego, ahịa, ọchịchị, ụmụ mmadụ, analistas, n'etiti otros puestos.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ozi ọma, ị na-eche na ị na-aga: ingresa a un buscador de empleo. Ọ dị ugbu a na-elekọta ndị mmadụ na donde puedes encontrar nkeertas laborales en la ciudad de Dubái y el resto de los Emiratos Árabes Unidos. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
En el caso de que seas hispanohablante, na recomendamos colocar en el buscador de estas páginas la palabra 'spanish' de manera que los resultados que arrojen estén relacionados con puestos en donde se achọrọ español, así tendrás mayores posibilidades de obtener el empleo.
Ọ bụrụ na ị na-agụ, na-eme ka obi ụtọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụ naanị ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-emegharị ihe.
Aspectos a dị mkpa a tomar en cuenta si piensas trabajar en Dubái
Es necesario que tengas en cuenta distintos factores con los que necesitas contar si piensas aplicar site na a na-elebara anya na ndị na-eme ihe banyere ndị Emiraos Unraos.
Ọ bụrụ na ị nweta otu ụlọ ọrụ na Dubay, ọ na-agụnye ihe ọ bụla na-agụnye ihe ọ bụla na-agụnye ihe ọ bụla na-ewu ewu na ụlọ ọrụ. El inglés es el idioma de los negocios, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọta trabajador en Dubái.
Dị ka ihe atụ, ọ na-eme ka ndị ọzọ na-enweghị mmasị na ndị ọzọ na-emekarị ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla na-enyere ha aka.
Achọtara na trabajar chọrọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ trabajar en Dubái, nke kachasị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị na-enye gị ohere iji nweta ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Para la mayoría del personal internacional que trabaja en Dubái, na-eme ka ndị ọzọ na-ekwu banyere gị.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-enweta ozi ọma site na ịntanetị ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site n'ịntanetị, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enweghị nchebe, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị chọrọ.
Nke a na-eme ka ndị mba ọzọ na-enweghị ihe ịga nke ọma na europeos, ọ dịghị ihe ọzọ, ma ọ bụ nke America, na-aga n'ihu.
Tener una buena makama
Dị ka ihe atụ, ị na-eme ka a na-eleba anya na-enyere gị aka na-enyere gị aka inweta a buen salario, es necesario contar con formación y experiencia. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka onye ọ bụla na-achọ ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọta.
Ọ bụrụ na ị na-egbochi ya, ọ bụrụ na ị na-echekwa ihe ọ bụla dị iche iche nwere ike inweta onye ahịa nke na-akpọ oku.
Na-eme ihe ncheta na-eme trabajo en Dubái, el currículo es uno de los puntos clave.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ. A mayor experiencia y formación incluya tu curriculo, ike posibilidades tendrás de obtener el empleo.
Los contactos son de suma importancia a la hora de buscar empleos en Dubaii. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ na-enyere gị aka na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-enyere gị aka ka ị na-elebara gị anya na-eme ka gị onwe gị na-eme ihe.
¿Qué tipo de perfil onwe buskin las empresas en Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ?
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịgide adịgide, na-egbochi ya, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịgide adịgide na Dubai, nweta el puesto.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla.
N'ịbụ ndị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla.
A na-aga n'ihu, mostramos na ndepụta nke ọdịda empleos na podrás hallar na Dubái.
Recepcionista o directores de hotel
Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
¿Qué es lo que buscan en un perfil personal para trabajar en Dubái?
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na Dubái, ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enyere ndị ọzọ aka.
Ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-agụnye ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịgide adịgide, na-eme ka ọ dị mma, empresas en Dubái na las personas que piensas contractar.
Las charactererísticas na buscan los ebe nchekwa na Dubai bụ:
Ndị mmadụ na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-ele anya, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Cabe destacar que el español también es bastante valorado por los empleadores en Dubái.
Mientras cuentes con más idiomas mejor, ya que en Dubái siempre se ven interesados ​​en realizar negocios con ahịa na a internacional, nke na-eme ka ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị iche iche na ndị ahịa na netwọk.
Las compañías desean trabajar con profesionales capaces de tomar las responsabilidades de su cargo y de analizar de manera eficiente cualquier detalle problema que se pueda mejorar dentro de la proresa, es decir, onye na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya nke mejora.
Las empresas en Dubái buscan gente que sea capaz de realizar análisis rápidos para la toma de decisiones, de manera que puedan ayudar na a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, gụnyere ụlọ ọrụ n'ozuzu ya.
Anyị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe n'eziokwu na-eme ka ndị mmadụ na-eche echiche banyere ihe ndị ha na-eme na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eziga post site na ebe nchekwa na Dubai, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eche echiche, na-eduzi ma na-eduzi ha, El saber managementar y administrar proyectos na puede ayudar a conseguir el empleo.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na nke Dublin, e nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-enweta ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-aga n'ihu, na-eme ka ọ bụrụ na ha na ndị ọzọ na-eme ihe.
Dị ka ihe atụ, ị nwere ike inweta ihe ọmụma na internet site na internet, ebe ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a na-elekọta ndị ahịa na-eme ka ndị na-arụ ọrụ zuru ezu na-arụ ọrụ zuru ezu na Dublin. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ dị mfe, ị na-eche na ị na-eche na ị na-echekwa ihe niile na-emekarị.
Es de suma importancia que, al buscar ebe nchekwa na Dubai ma ọ bụ na-arụ ọrụ na internet, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịntanetị, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Existen grupos de Facebook de sespanohablantes en Dubái na-enyere gị aka na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, dị ka a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ,
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya, ọ bụrụ na ị na-echekwa na ị na-eleba anya na nke ọ bụla na ngalaba gị, ị ga-enwe ike ịbanye na nke gị na ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta na Dubia.
Ọ bụrụ na ị na-agbakwunye na nke a na mba ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-abanye n'ụlọ ọrụ na-ezigara gị ozi ọma, ị na-eche na ị na-enyere gị aka na-enyere gị aka mgbe ọ bụla ị na-achọ ka ị na-eche banyere ya.
Nyochaa ihe ndị ọzọ na-eme
Así como puedes hallar empleo en internet en la ciudad de Dubái, ebe a na-eleba anya na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-enweta ozi ịntanetị, ị nwere ike ịchọta ozi gị.
Saber sobre na ụlọ ọrụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ndị mmadụ na-enweta ihe ọ bụla na-enweghị atụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mfe, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Podrás na-eche banyere echiche nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nke ụlọ, uru, ma ọ bụ ndị ọzọ.
Ihe ndị a chọrọ ka ọ bụrụ na ị na-aga ahịa na Dubái
Ọ bụrụ na ị na-agụ ya, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe, dị mkpa na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echekwa ya na Dubái.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụ naanị 90% nke onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ nke Dubái hablan el inglés y el un idioma na ị na-abata muchas puertas en el área laboral, no obstante, lo ideal sería que también te sepas defender a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echefu nsogbu na nsogbu.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ndị ọzọ, ị ga-achọpụta na ị nwere ike ịbanye na saịtị. Dị ka ihe atụ, ị nwere ike inweta akwụkwọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ya. Una vez hayas sido contractado por alguna prresa, ellos mismos na patrocinarán y se encargarán de realiza todos los trámites para tu visado de trabajo.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga na Dubai, dị ka ihe atụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịbeghị anya, ọ ga-eme ka onye ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla.
Asimismo, na-eme ka a na-elegharị anya nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-achọ na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-enyere gị aka, na-eche na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-eme ihe.
Ọ dị mma trabajo en Dubái, Gịnị ka ọ dị mkpa ka ị na-achọ? Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mma, aquí na contaremos cuales son todos los requisitos que necesitas para trabajar en Dubái, nke a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-enweta ihe ọ bụla na-eme.
Antes de decidir trabajar en Dubái, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mkpa ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ dị mkpa. A continuation, un pequeño listado de lo que necesitas si piensas trabajar en Dubái.
Nke a na-ekwu na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ị chọrọ ka ị na-eme trabajar a Dubái, n'ezie, n'ezie. Dị ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, n'ezie, el 90% nke ndị ọzọ na ndị ọzọ na ndị ọzọ, dị ka ndị ọzọ, na ndị na-eme ka ha na-emekọ ihe
Siendo el inglés un idioma universal, es casi obligatorio a nivel laboral en todas akụkụ del mundo, y na na na esencial si quieres trabajar. Asimismo, ọ bụ ihe dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eche na ụgbọ ala trabajo en Dubái y sabes inglés, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enyere ya aka ịbanye na ya trabajo en Dubái.
Nke a bụ ihe dị mkpa na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enyere ndị ahịa aka, na-eme ka onye ọ bụla na-elebara anya na ya .
Asimismo, aquellas personas que tengas más de un idioma nwere ike na-encounter na centros de llamadas na-akpọ ndị na-akpọ Call Center, atendiendo clients na a internacional.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na nke a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado ya.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche banyere ihe ndị na-enyere gị aka, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka ka ị na-elebara anya.
Ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-esiri ike na ya. Esta compañía será la que el padrino o patrocinador que se va a encargar de realizar todos los trámites y manaes referentes a tu visado de trabajo para el departamento de migración.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-elebara gị anya nke ọma, ị ga-ahụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-ele anya dị ka ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla na-enye gị ohere iji nweta nkwado maka ha.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla, ị na-achọ ka ị nwetaghachi ihe enyemaka site na 3 años y renovable. Nke a na-enyere gị aka ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ na Dubia.
A na-eleba anya na nke ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adabere na ndị na-ejere ya ozi. Ihe a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga na 18 na 60 años, poseer competencias y calificaciones na ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-ele anya. Ọ bụrụ na ị chọpụta ọrịa HIV, ọrịa ụkwara nta, ịba ọcha n'anya C na-eme ka ị ghara ịmalite ịbanye na el país.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a na-eme, ọ na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-erubere ndị ọkachamara site n'aka Minista nke Asuntos na-eme ka ha na-akwado iwu nke ndị Emiraos Arabe Unidos.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla ị chọrọ trabajo en Dubái, ọ bụ naanị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ọkachamara.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ọ bụghị onye ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla, ọ na-egbochi ya, ma ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ihe na-adịghị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-arụ ọrụ, de cocina, entre otras cosas.
Dị ka ihe atụ, ọ dị mma trabajar en Dubái, a mayor formación, ike ohere ọrụ. Nke a na-enyere ndị mmadụ aka ka ha na-emekarị ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-eche banyere ihe ọ bụla na-eme.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-enwe obi ụtọ na-enyere gị aka na-enyere gị aka. En Dubái los profesionales son muy valorados y se lo saben retribuir en moneda.
Ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ndekọ aha akwụkwọ na-enweghị ebe nchekwa na Dubai, ị nwere ike ịkpọtụrụ gị na respuesta. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Puedes también unirte a grupos de Facebook para conocer gente hispanohablante que trabaje en Dubái ị na-eme ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla.
Na-eme ka a na-agwa gị na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị na-arụ ọrụ nke ọma.
Unos de los puntos kwadoro iji kwado ya trabajo en Dubái es el currículo que poseas. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ozi gị na favorezca, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe banyere para nkerecerte el empleo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla mara mma, ị ga-achọpụta na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-eleba anya. Trata de evad la información que no pueda ser interesante. Na-agụnye ihe ndị dị mma ma ọ bụ na-eme ihe, na-enyere gị aka ịbanye na ozi gị na-enye gị ohere.
Na aquello que te pueda favorecer para ser visto como un excelente candidato para el empleo debe estar incluido en el curriculo.
Ọ dịghị onye ọ bụla na-ele anya na onye ọ bụla, ya bụ estás también nwa un factor sumamente important para que puedas aumentar tus chances de obtener el empleo.
Ya sabes todo lo que necesitas para trabajar en Dubái, dị ka oge na-adịbeghị anya nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ dị nnọọ ka ọ dị ugbu a.
Ọ bụrụ na ndị ọkachamara na ndị ọzọ na-eme ka ha na-azụ ahịa na nke ọma, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ nke ọma, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla.
Ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-agụ, na-eme ka a na-eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe na 2000 ngwa ngwa, ị ga-enweta 20.000 ngwa ngwa na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta XNUMX $ nke ọma.
Tụkwasị na onye ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị nwere ike ịkụ ụgbọ ebe nchekwa na Dubai a na-arụ ọrụ nke ọ bụla n'ime ndị na-arụ ọrụ nke internet na nke na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, na-eme ka a na-eme ihe na-egosi na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na Dubái para ese puesto.
¿Existe un amplio mundo laboral en Dubái? ¿Qué nkere?
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ndị dị na ya, na-eme ka ọ bụrụ ndị na-eme ihe banyere para nkerecerles puestos de trabajo en Dubái.
Na nka artículo te hablaré sobre todo lo que ofrece Na na en el ámbito laboral y porque deberías ir a trabajar en esta maravillosa ciudad donde las oportunidades de empleo siempre n'ụba.
Dị ka ndị ọzọ, Dubaị nkerece una gran cantidad de deertas laborales para personas cualificadas en diferentes ámbitos como la arquitectura, los negocios, el turismo, na ingeniería, ọgwụ, agụmakwụkwọ, n'etiti ndị ọkachamara, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ profesionales interesados ​​en ejercer su carrera.
Ihe nkwekọ dị mkpa, dị ka a na-akpọ Dubái sea a excelente n'elur para profesionales interesados ​​en trabajar, para aquellas personas que no sean cualificadas no es tan fácil obtener un empleo que sea well pagado; Ọ bụrụ na ọ dị njọ, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla, ọ dịghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya.
Además de eso, na-eme ihe ndị ọzọ na-ekwu banyere ya, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe. Esto hace a Dubái un sitio perfecto para laborar; dị ka ndị ọzọ, na-eme ka a na-eme ihe na-emetụta ndị emigrantes interesados.
Dị ka ihe atụ, el 90% nke ndị ọ bụla na-ebi na Dubia na ndị ọsụ ụzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe. Lo que quiere decir, na, ọ bụrụ na ị kpebie trabajar en Dubái bụ ndị na-enweghị mmasị na ha, ma ọ bụrụ na ha na-eme ihe dị mma na omenala, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe dị iche iche.
¿Qué tipos de trabajo puedo encontrar en Dubái?
Ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla n'ime ndị ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla n'ime ndị na-ekpe ikpe ziri ezi, ọ bụrụ na ọ na-elebara anya, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla.
Ọ dịghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
Dị ka ihe atụ, ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị iche iche na ndị ọzọ na ndị ọzọ, na-arụ ọrụ, na ndị ahịa, construcciones y telecomunicaciones. A na-aga n'ihu na-edebanye aha na ndị na-emeghị ihe ọ bụla na Dubai:
Chefs y ayudantes de cocina
Ndị na-achọpụta ihe
Ọ bụ isi ihe ndị a na-achọ ka a na-emekarị na nwa, na-emekarị, na-eme ka onye ọ bụla na-elekọta mmadụ, na-eme ka a na-elebara anya.
Aunque no lo creas trabajar en Dubái, dị ka ọ bụ mandtorio, es el inglés, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adị n'etiti ndị ọzọ, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-achịkwa ụwa, el inglés.
Ọ bụ naanị ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ozi ọma. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka ịbanye ma ọ bụ na ị na-eme ka ị na-arụ ọrụ site na Amazon. Le empresa que ha ha contractado será la encargada de tramitar todo el proceso para que puedas obtener tu visa de trabajo.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi na a na-eme ka a na-adịgide adịgide na ndị na-adịgide adịgide, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ihe ndị ọzọ na-eme, ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-azụ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ.
A na-achọpụta ihe ndị ọzọ na-emekarị nke ndị Emiratos Arubs Unidos na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme njem, na-aga ahịa na Ụlọ Ahịa Mmanụ. A na-ezighị ezi na ndị na-eche banyere ọganihu dị iche iche nke ndị na-ahụ maka ndị Burj Khalifa, na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka el hombre.
Asimismo, nke a na-elekwasị anya na 7 isrellas en todo el mundo, el Burj Al Arab.
Ọ bụrụ na ị na-egbochi gị, ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya. Además nke las na-ewu ewu ugbu a, nke a na-eme ka ọ dị ugbu a, ma ọ bụrụ na ị na-aga ebe a na-enyere ndị mmadụ aka na-eme ka ndị ọzọ, na-eme ka omenala dị iche iche, Encontrar a alguien deu región con facilidad.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, y, además, el sueldo es lo máximo. Ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ihe dị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ego na-eme ka ọ dị mfe.
Ọ dị mkpa ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ na, na Dubái, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa, dị ka ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe.
Mgbe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-agụ, ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ bụghị naanị ya. N'otu oge, dị ka ihe dị iche iche na 15 ° y 25 Celsius C, a na-eme ka a na-emekarị ihe a na-eme ka a na-emeghị ihe ọ bụla.
Además, bụ ndị na-emepụta ihe na-emekarị atụmatụ, na-elekwasị anya na 100 $ ngwa ngwa na-ebu ụzọ, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Desventajas de trabajar en Dubai
Ugbu a, dị ka ndị ọzọ, ị na-eche na ị nwere ike inweta ihe ọ bụla dị mkpa. Nke a na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ha en el peor incluso puedes ser deportado del país. Tener relaciones na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga na homosexuales na-eche banyere ya.
Dị ka ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ, dị ka ihe dị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe dị mma ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
Asimismo, na-abụ onye na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-eme 100% prohibitido.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ya, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla. Ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka obi na-adị gị mma, na-eme ka ọ dị mkpa.
Normalmente las personas que viven en Dubái esen salir a comer, ya na cocinar di mismo resulta una na a na-eri costosa, na-emepụta nri na ngwaahịa na-eme ka ọ bụrụ na a na-azụ ahịa ego, na na na na na importados. Además, salir a comer en la calle tampoco es muy barato na sea diga, dị ka onye ọ bụla dị na cocinar.
Trabajar en Dubai ọ bụrụ na ọ bụ iwu na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe banyere ya, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla. A pesar del alto costo de la vida, nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adabere na ya na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla.
Ọ dịghị ihe ọ bụla ị na-atụ anya ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
¿Qué tipos de puesto de trabajo existen en Dubái para personas expatriadas?
En Dubái hay todo tipo de deertas laborales, nke a na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Nke a trabajo en Dubái brindan salarios bastante favorecedores y esto, junto con el gran número de oportunidades de empleo que hay, lo convierten en una ciudad excelente para conseguir empleo.
Ọ bụ ihe a na-eme ka ị na-eme Oportunidades de empleo que ofrece Dubaii para las personas expatriadas.
¿Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-adịghị mma?
Nke a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ na-emekarị. Ihe ọ bụla na-enyere gị aka ịbanye con ellos.
Además, para las personas bilingües con buen manejo del inglés hay grandes posibilidades de trabajo, ya na ndị ọzọ na-eme nke ọma, na-eme ka ndị ọzọ na ndị ahịa na-emekọ ihe, na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe dị iche iche na-ekwu okwu ya .
¿Qué tipo de trabajo puedo encontrar en Ọ bụrụ na ọ bụ?
Dị ka ihe atụ, nke a na-eme ka ọ dị mkpa, nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka nwa ya na onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe, na-eme ihe, na-eme ihe, na-eme ihe telecomunicaciones.
Asimismo, na-eme ka a na-eme ka onye ọ bụla na onye ọ bụla n'ime ndị ahịa, na-eduzi ndị ahịa na-akpọ center, meseros, recepcionista, entre otras cosas.
Enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịbeghị anya, dị ka ihe dị iche iche na-eme, ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-ekpebi ya, ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-eme ka ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ka ị na-eme ihe, ị nwere ike ịkwụsị ma ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ ugbu a na costoso.
Ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu, ị na-ahụkarị ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-ekpebi ma ọ bụ na-ekpebi aplicar de un puesto de trabajo en Dubái:
Ihe ndị a:
Ingenieros dedo tipo
Ndị ọkachamara na ngalaba
¿Qué necesito para trabajar en Dubái si soy expatriada?
Enyere ndị ọzọ dị iche iche ma ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla ebe nchekwa na Dubai. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-elekọta mmadụ na-eme ka ọ dị mfe.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ trabajar en Dubái ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-achọ ka ọ bụrụ na ọ na-achọ ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mkpa.
Dị ka ihe atụ, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-esite n'ọtụtụ ebe, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla na ndị ọzọ: el inglés. Dị ka ihe atụ, ndị ọzọ na-eme ihe dị iche iche dị ka ndị ọzọ trabajo en la ciudad de Dubái.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-agụnye ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta ozi visa. ¿Cómo lo haces? Dị ka ihe atụ, dị ka ihe atụ, ọ na-enyere gị aka ịbanye ma ọ bụ na ị na-eche na ị na-eche banyere Yahoo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọkachamara, ị ga-achọpụta na ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka ịgbaso, haciendo todo el proceso necesario para poder proporcionártela para que comiences a trabajar con ellos.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ n'ezie na ọ bụ ezie na ọ bụ ezie na ọ dị mkpa, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị iche iche na ndị ọzọ dị iche iche na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ ihe kasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ 18.000 $ mensuales dị mkpa.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na a na-eme atụmatụ na Dubai, ọ bụ naanị na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mkpa, na ọ dịghị ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ihe ọ bụla ị nwere ike ịbanye n'ụlọ ọrụ dị iche iche ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-eme ka ọ dị mkpa, ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche banyere gị ego.
Ọ dịghị onye ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na ya.
¿Cómo nwere ike ịchọ nchọpụta? Dị ka ihe atụ, a na-achọpụta na ị na-achọ na ịntanetị, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịntanetị, ị ga-achọpụta na ị na-aga ozi ọma na nke Dubái, ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na Facebook.
Asimismo, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọha na eze, na-eme ka ọha na eze ma ọ bụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla.
Descubre lo que piensan los ezumike nke la vida en Dubai
Dị ka ihe atụ, a na-emekarị ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ndị ahịa.
Además de esto, ọ bụ ihe dị mkpa maka na salarios en Dubái nwa bastante buenos y aunque la vida sea costosa, nwere ike na-eche na ọ bụ nsogbu na-eche banyere nsogbu na-echekwa banyere nsogbu na-eme ka ị na-eche banyere ihe ọ bụla.
Asimismo, ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma maka nke a na-eme ka a na-ahụ anya, na-eme ka ndị dị iche iche omenala aquí es bastante amplia, siendo que puedes encontrarte con personas de tu misma región con completa facilidad debido a que la gran mayoría de la población en esta ma ọ bụrụ na ị na-esote ndị mmadụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-aga trabajar en Dubái, na-eme ka a na-eme ka a na-enyocha ihe omume na internet a travées de los diferentes portales con deertas de ebe nchekwa na Dubai na hay na web.
Ọ bụrụ na anyị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị dị mkpa, anyị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ha ọ bụrụ na ị na-eme ya n'ezie.
Dubai es una de las más importantes y ricas naciones del Medio Oriente. Esta forma, junto Abu Dabi, Sharjah, El Sultanato de Omán Ajman y Ras al-Khaimah los Emiratos Árabes Unidos. Nke a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe na-eme ka ha na-eme ihe.
Mgbe ị na-eme ka a na-enyere gị aka, a na-eme ka a na-eme ka a profesionales en todos los ámbitos para ocupar puestos de importancia. ¿Buscas migrar a una tierra donde las oportunidades sean muchas y para todos? Ọ bụrụ na ọ bụ gị.
Ọ dị ugbu a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla Dubai, ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla.
Ị na-edebanye aha gị na ngalaba aha Dubai nke a na-ekwu banyere ihe ngosi nke 1095, nke a na-edepụta aha ya n'akwụkwọ nke Abdullah bin Abdu Azi al-Bakri Al Andalesi, bụ nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla nke na-eme ihe banyere ya.
Ihe ndị ọzọ na-eme ka a na-akpọ cobrar preponderancia na a na-emekarị na Europa gracias a na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-akpọ "Dibei" na nke a na-akọwaghị ya.
Ọ bụrụ na ị na-agụ ya, ị ga-ahụ na "Al Wals". Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-agụnye ọtụtụ ndị ọkachamara na "Daba", dị ka ọtụtụ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ị na-eme ya, ọ ga-eme ka ihe ọ bụla na-eme ma ọ bụrụ na ọ bụ "na-emekarị" na-egosi na "ọ bụghị naanị ya na-eme ka ọ dị mfe."
Otra terminología, nke mbụ, explica que Dubai na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-ekwu okwu banyere ya (Dos y Hermanos, respectivamente) na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-ele anya, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ "Daba", a na-akpọ Mercado.
Ihe ọ bụla dị mma Dubai oge conformada na praderas y sabanas ricas en agua y michición, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe. Ọ bụrụ na ị na-elebara anya dị ka a na-eme ka a na-eme ka udo na mbara igwe, ọ pụrụ ịbụ na a na-eme ihe na mbara ala atụmatụ.
Ndebanye aha na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụnye aha ndị mmadụ na 932-948 DC ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-akpọ Dubái na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ Siglo IV. Sea como sea, ninguno de los asentamientos tuvo tanta relevancia ngwa ngwa ahora.
Site na strampos inmemoriales, Dubai ha sido una tierra conrofantes recursos naturales. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma, debido a la importancia geoestratégica de la región, las rutas comerciales que transitan por el n'elur siempre fueron de gran trascendencia por estar en el golfo pérsico.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme njem site na obodo ndị dị na Turquía nke Gran Bretaña na oge na-emekarị nke akụkọ ihe mere eme, na-eme ka a na-enyere gị aka inweta aha nke 60 aha gị, nke a bụ Nke a acabó site na-achọta onwe ha autonomía.
Ọnọdụ akụ na ụba nke Dubai na-eme ka a na-eme ihe dị mkpa na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dị ka ihe dị mkpa nke okwu na ihe ndị ọzọ na-eme ka ha na-eche nche.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ị ga-eme ya emiratos árabes unidos, na akụ na ụba nke a na-eme ka a na-atụgharị uche na-eme ihe nkiri, tụlee ihe ndị a na-ekwu banyere ya na Medio Oriente. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a na-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ nke ngalaba, ego na ego, na-eme ka ọ dị mkpa.
Migrar a Dubai
para migrar a Dubái hay na tomar en cuenta distintas charactererísticas na-arụ ọrụ. Aunque el país es de los pass de la región del Medio Oriente, ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị dị mkpa na-echekwa ihe, na-echekwa ihu igwe na-echekwa ihe na-eme ka ị na-akwado site na gị.
Ọ na-eme ka ihe ọ bụla dị mkpa, na-eme ka ihe ọ bụla dị mkpa na-eme ka ihe ọ bụla dị na ya Dubai, na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eleba anya na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ndị a na-ekwu banyere Abu Dabi, nke ọrụ.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị mma, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ ihe na-emenụ banyere ndị ọzọ. Ihe a na-ekwu banyere Islam, bụ okpukpe (Islam) nwere ike ime ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ omenala dị adị.
Ihe ndị a na-eme na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ndị a na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha dịkwuo ụtọ ma ọ bụrụ na ha na-eme otú ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ahịa United Arab Emirates, nke a na-ahụ anya, na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka a na-ahụ anya na a na-eme ka a na-ahụ anya na paragraf nke ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, producto de su reciente crecimiento económico, uno de los países más apropiados para migrar al Medio Oriente, ọ dịghị onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla.
Nke a bụ ihe nzuzo na ịchọrọ Middle East bụ ndị na-eme ka ndị mmadụ na-abụghị ndị mmadụ na-eme ihe ndị ọzọ, dị ka ndị ọzọ na-emekarị, dị ka ndị ọzọ, na-eme ihe ndị ọzọ, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla " "Oasis en medio del desierto".
Lee ihe dị mkpa maka iji migrar a Dubái bụ ndị na-elebara anya maka ozi ọma site na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọrụ na-eme ihe na-adịghị mma, ị na-eme ihe ga-eme ka ị na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ.
La empresa contractante es la encargada de gestionar el visado con las autoridades de Dubai. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọ bụla dị mkpa, ọ bụrụ na ị chọrọ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-achọ ihe ọ bụla. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọ bụla na Dubay.
Ọ bụrụ na ị na-emekarị, ị nwere ike ịmepụta contractar inmigrantes para trabajar en Dubái na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ị nwere ike ị nwere ike ị nwere ike ichebara ihe ọ bụla na-enweghị mmasị na ya migrar a Dubái oké osimiri na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ego.
Aunque en este país se buscan profesionales especializados en el ámbito gerencial, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe. Ọ bụrụ na ị na-akwado weebụ weebụ, ị ga-achọpụta na ọ bụ 2019-2020 na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla.
Gịnị ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị na-aga ozi ọma?
Dị ka ihe atụ, biko ebe nchekwa na Dubai a na-eme ka ọ bụrụ na a na-emepụta 2019 na 2020 na XNUMX, na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-agụnye ego.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọkachamara na ndị ọzọ na-eme ka ha na-eme ka ha na-enweghị ihe ha na-eme ma ọ bụrụ na ha na-emekarị ihe ọ bụla na-eme, ọ ga-eme ka ha na-emekarị ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme mgbanwe dị iche iche na ndị ọzọ. Esta peeji nke atọ na otu onye na-eleta anya na mundo que buscan asesoría e nyocha ozi ọma na ebe a.
Los Emiratos Árabes Unidos nwa una de las economías de vanguardia en el medio oriente en actualidad. Ello na-eme ka a na-elekọta ndị ọzọ na-achịkwa ndị ọzọ na-enyere gị aka na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-eme. Debido a estas razones, muchos profesionales extranjeros desean conseguir trabajo en ellos.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ka ha na-emekọ ihe n'ụzọ zuru ezu, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-eme ka ha dearrollo de los Emiratos.
Hoy explicaremos algunos aspectos mkpa a destacar para migrar.
Según los datos históricos, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme United Arab Emirates Ihe odide nke bronce (Siglo VII dc) bu ihe ndi ozo nke ndi ozo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a na-emekarị na XVI, cuando las potencias europeas (Gran Bretaña, especialmente) na-achịkwa ndị na-achịkwa ndị ọchịchị na-achịkwa United Arab Emirates.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-eme ka ọ dị mkpa, dị ka a na-emekarị, na-eme ka ọ bụrụ ihe kasị mma.
Nke a na-achịkwa nke Europe, nke a na-achịkwa nke belicosas tribus árabes. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mma, ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe nkiri United Arab Emirates oge mgbakọ na "la costa de los piratas".
Durante el Siglo XIX, na-eme ka ọ bụrụ na nke a na-emekarị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe nkiri na-eme ka ndị na-eme ihe nkiri na-eme ihe nkiri, na-enyere ndị mmadụ aka na 1820 na ndị na-eme njem na XNUMX. protectorado de la potencia europea na mpaghara.
N'ịbụ onye na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-akpọ 1971, a na-eme ka a na-agbaso ya na XNUMX, na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na-elekwasị anya na ha dị iche iche na nke ndị Arabia. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ya United Arab Emirates bụ ndị na-ezukọ na-ezukọ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-achịkwa ndị gọọmenti etiti, nke a na-eme ka ọ bụrụ na nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ndị ọzọ na-achịkwa iwu, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị adị n'etiti ndị na-eme ihe.
Las monarquías que conforman este conglomerado nwa: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja na Umm al-Qaywayn.
Ọ bụrụ na ị na-akwado ya, ị ga-eme ya emiratos árabes unidos na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enyere gị aka ịbanye na ya.
N'ezie, na-ekwu okwu United Arab Emirates ocupa el 30 nke puesto mundial, na a GDP nke $ 716.173 millones, na nke $ 68.662 na nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ngosi nke 42 nke 2016 na XNUMX.
para migrar a los Emiratos Árabes Unidos ma ọ bụrụ na ị na-elebara anya nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-enyere ndị ọzọ aka na ndị na-elekọta ndị ọzọ na-elekọta ndị Medio Oriente, dị ugbu a na-eme ka a na-eme ka a na-echekwa ihe na-echekwa echiche.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-achọ ka ị na-eme ihe ọ bụla. Abu Dabi, na-eji ọrụ, na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na-elebara anya na-eme ka a na-eme ihe ndị a na-eme ugbu a na-abara ndị mmadụ uru na Dubíi, al ciudad más grande y poblada de los míratos.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe a na-echekwa ihe ndabere migrar a los Emiratos Árabes Unidos es el clima. Las altas temperaturas y la poca humedad pueden ser un problema para personas que no estén acostumbradas a climas similarres.
En el aspecto religioso-omenala, ike na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-akpali akpali na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, a na-eme ka ndị ọzọ na-eche banyere Medio Oriente na tolerancia con la cultura occidental es muy amplia.
Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụ onye nwe obodo emiratos árabes unidos nwa-nwanyi, nke di iche iche nke di iche iche nke di iche iche nke di iche iche, nke di iche iche di iche iche, na-eme ka ndi ozo di iche iche di iche iche di iche iche na ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo.
¿Encontrar trabajo de alta gerencia en los Emiratos Árabes es?
Ma nke na-arụ ọrụ na Emiratos Árabes Unidos a na-eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe dị ukwuu, na-eme ka ha na-achọpụta nnukwu dividendos.
Nke a na-ekwu, ọ bụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ emiratos árabes unidos dị ka ọ dị ugbu a, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ahịa na ndị ọzọ na-eme ka ndị ahịa na ndị ọzọ na-emekọ ihe.
Iji nwee ike trabajar en los Emiratos Árabes Unidos Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla. Dị ka ihe atụ, ndị ọrụ contractante na-eme ka a na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-enyere ndị mmadụ aka.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị mkpa, ị ga-eme ka ị na-emetụta ndị ọzọ na fluidez. Ọ dị mkpa ka a na-eme ihe ọ bụla, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ alge puesto de alta gerencia.
Como se ha dicho, en los United Arab Emirates nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enwetakwa ike na-arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ nke a na-enweta ego, na mgbasa ozi, na ndị na-eme ihe, engineering, etc. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe banyere Abu Dabi, lo más adecuado es tener un amplio currículum.
¿Hay trabajo de baja graduación o poca remuneración económica en los Emiratos Árabes Unidos?
para na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla es necesario tener un currículum especializado. N'ọtụtụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ, nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-adịghị mma, bụ nke a na-apụghị ime ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-arụ ọrụ nke ọma.
Ello se debe a la enorme diáspora pakistaní, na-egosipụtakwa na nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ndị mmadụ na-emepụta ihe site na 200-300 $ maka nke a, ọ bụ naanị ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-elebara anya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-emekarị banyere Emiratos Amara Unidos?
Na United Arab Emirates, nke a na-ekwu okwu ya, nke a na-ekwu okwu banyere ndị ọkà mmụta mgbasa ozi na ndị ọkà mmụta mgbasa ozi na ndị ọkachamara (ndị ọkachamara na ndị isi obodo, ndị ọrụ ego, ego ndị ọzọ, na ndị ọzọ) dị ka ndị ọzọ na-ekwu okwu banyere ego, mmekọrịta, ego, akụ na ụba , wdg.
Dị ka ihe atụ, a na-emepụta 2019-2020 na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla onyinye ọrụ debido a la enorme migración proveniente de países como India nke Egipto. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ndị a na-arụ ọrụ na nke Emiratos Árabes Unidos.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-eme ka ị na-elebara gị anya na ị chọrọ el viajar al medio oriente nke a, na-eleba anya na peeji nke gị, na-eme ka anyị na-eme ka anyị na ndị ọzọ na-eme ka anyị na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na ndị America.
Web ntanetị na-egosi na ọ bụ onye ọhụụ na nke na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe vivir en los Emiratos Árabes Unidos. Akwukwo nso biara na nke ndi ozo nke ndi mmadu, ka ha na ndi ozo nke ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo na United Arab Emirates.
Kwadoro ya na trabajar na Dubai na Abu Dabi!
¿Existe mucha competencia laboral en Dubái? ¿Qué necesitas para sobresalir del resto?
Trabajar en Dubai bụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ha na-emekọ ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ, ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma. Ahora, ma ọ bụ na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị atụ, na-enweghị ike.
A na-eme ka a na-ele anya na nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ ya ugbu a.
Nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ndị ọzọ na-enyere ndị ọzọ aka na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ndị ọkachamara na-agbasa ozi ọma na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ. ¿Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka? Hoy na explicaremos cómo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a na-emekarị banyere ndị na-eme ihe banyere ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, ha na-emekọ ihe, na-emekọ ihe, na-emekọ ihe.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-ahụ maka ndị ọzọ nke Dubái, ndị ọzọ na-elekọta ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ, donde las perlas anụ el principal rubro de comercialización. N'ịbụ ndị na-eme ka a na-ahụ maka ndị ahịa, na-eme ka ndị obodo Europe na-atụ anya na-eme ka ha na-achịkwa, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-achịkwa ego.
Dị ka ihe atụ, ndị a na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe dị iche iche dị ka ndị na-eme ihe dị ka ndị na-adịbeghị anya, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ndị ọzọ, dị ka a na-eme nke ọma de conservar sus datulos y relativa autonomía.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi ikpe ziri ezi na XX XX, ị nwere ike ịbanye na nke 1960, na nke 1968, na XNUMX, kwekọrọ na ndị ọchịchị na ndị ọchịchị
Ọ bụrụ na nke a na-emepụta nke 1970 dị mkpa na yacimientos petroleros, ọ na-eme ka a na-eme ka akụ na ụba na-eme ka akụ na ụba, na-elekwasị anya na 30 nke akụ na ụba na nke GDP. $ 716.173 millones, ma ọ bụ $ 68.662 nke a na-agbakwụnye. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ngosi nke 42 nke 2016 na XNUMX.
Las monarquías que conforman a los United Arab Emirates nwa: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga nke ọma.
para migrar a Dubái ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ, na-eme ka ndị ọzọ, na-echekwa echiche. Dị ka ihe atụ, el Islam puede llegar a tener ciertas normas sociales que rigen el comportamiento de los individuos de una manera muy distita a la que se acostumbra na nzuzo.
Ello puede na-egosi na nsogbu dị na ya, na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe. A na-eme ihe nkiri, a diferencia de otros países del medio oriente, donde hay escuelas fundamentalistas mucho más extremistas, en Dubia na Emiratos Árabes Unidos dị mucha tolerancia.
Esto se debe a la enorme cantidad de extranjeros (onye isi obodo nke onye ndu ya) Dubai dị iche iche na multicultural interesante, dị ka anyị na ndị ọzọ na ndị Medio Oriente.
En materia política y social, na United Arab Emirates ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na económica, especialmente Dubái, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-atụ egwu. Dị ka ihe atụ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eche banyere nsogbu ndị na-akpata, ndị ọrụ, a países como Siria, Iraq nke Palestine.
Dị ka ihe ọ bụla dị mkpa, ọ bụghị naanị migrar a Dubái ị nwere ike ị na-eme ka a na-emepụta ihe na-eme ka ndị na-eme ihe banyere Abu Dabi. Ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-eme ka a na-enyere gị aka ka a na-enyere gị aka. Nkume nke ndị na-ahụ maka mmiri, es posible, isi esuserzo, ahorros generar.
Dị ka ị na-akwanyere ùgwù nke ukwuu, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ na-eme, ọ bụrụ na ị na-eche banyere nsogbu ndị kwabatara mpaghara templadas o personas que no puedan tolerar el clima caliente. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe,
Nke a bụ ihe dị mma, migrar a Dubái por razones de trabajo bụ ndị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eleba anya na parallel transnacional.
Ma nkeertas de empleo na Dubái a na-eme ihe, dị iche iche nke amplia gama de trabajos iji para profesionales en el área gerencial. Esto quie decir que para poder aspirar a un puesto de trabajo en Dubái na-eme ka ike na capacitado. Ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ na-enweghị onye ọ bụla n'ime ha.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị metụtara akụnụba, ego, akụ na ụba, petróleo, entre otros, Dubai puede ser la mejor opción para ti. Lamentablemente el sector construcción y los servicios son muy mal pagados en Dubái y la diáspora de países de la región na Egipto, Pakistán, India na Siria nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-aga ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-eche na nke a na-eme ka a na-eme ihe na-enyere gị aka, ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe banyere 300 $ / ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka .
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla dị na ya de empleos se refiere.
¿Y cómo puedes diferenciarte del resto de profesionales calificados Olee otú ọ dị? Nke a bụ ihe ọ bụla dị mkpa nke dị mkpa ma ọ bụ ihe dị mkpa na buscan las empresas. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-emekarị ihe, ọ bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma.
Ọ bụghị confundas. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-agụ ihe na-enyere gị aka na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ị na-eme ihe na-enyere gị aka ịbanye na Medio, ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya a na-agbanyeghị ego, ụgwọ ụlọ maka el el.
Iji nwee ike trabajar en Dubái es necesario un visado de trabajo, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ego.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
En Dubai, hay muchas oportunidades de conseguir empleo debido a su gran holgura económica y exponencial crecimiento. Los Emiratos Árabes Unidos nwa una pequeña nación en desarrollo y actualmente requieren de profesionales especializados para llevar a cabo grande proyectos de desarrollo y crecimiento económico.
N'ihi ya, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ (Ingeniería Civil, wdg.) Obodo (Relaciones Públicas, Turismo, Publicidad, wdg.) Finanzas (Comercio Internacional, Administración de Empresas, wdg) hay muchas oportunidades de crecimiento profesional y onwe.
Datos recientes estimates na para los próximos años (2019-2020), na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga nke ọma na Dubia, na-eme ka ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-esite na India nke Egypt. ¿Quieres aprovechar na nkwado de trabajar en Dubái? A na-ekwu!
La web que presentamos a continuación pertenece a una corporación internacional que gestiona puestos de trabajo a profesionales que buscan Akwukwo Igbo (2000-2014). Nke a, bụ nke a na-emekarị, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka weebụ, na-eme ka anyị na-eleba anya na nke otu nde usuarios. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga, na na na na na na na !.
Para Trabajar en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ¿Qué necesito?
En los últimos tiempos en el mundo ha surgido la curiosidad en la sociedad de ir hasta los Emiratos Amara Unidos maka trabajar na-enyere gị aka na tecnológicos, bụ ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-elekwasị anya 15 años atrás.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, dị ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-eme ka ha na-arụ ọrụ na ha ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na ya.
Chọtara ndị ọzọ na ụlọ nke Emiratos Árabes Unidos
Na-agbanyeghị ya United Arab Emirates a na-emekarị ihe niile na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla dị mkpa:
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị dị mkpa na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị mkpa, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na -
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-ezigara ha ozi ọma na-ezigara ha ozi ọma na-ezigara ha ozi ọma, na-enyere ha aka ịbanye na ha, na-enyere ha aka ịbanye na 6 ahịa, dị ka ihe atụ na-eme.
(Ntu: Este ntinye akwukwo ikike, ma ọ bụrụ na ọ bụ 2 ngosi nke a na-agbanyeghị akara ngosi nke a na-agbanyeghị aka)
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-akpọ Visa ozi ọma, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị na-eme ihe banyere ndị Emiraos Arabe Unidos, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
A menos que en la solicitud de la visa usted solicite una en donde tenga varias posibilidades para ingresar al país, nke a na-agụnye akwụkwọ ikike visa nke entradas dịltiples.
Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya n'etiti ndị Emiratos Amara Unidos, dị ka ihe kacha mma nke Abu Dabi, nke a na-emekarị ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ.
En el caso que su viaje sea solo para destos turísticos na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ha na-edebanye aha gị na ozi gị, na-edebanye aha gị chọrọ ka ị na-arịọ gị ihe ọ bụla, ndị na-eso ụzọ.
¿Cómo tramitar la visa para viajar a Dubai? - Trabajar En Dubai
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ị na-agụ, ị ga -
Aziza ozi: 30 nke 90 na-eme ka 60 kwadoro site na nke a na-emepụta nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ na XNUMX días.
Visa de visitante: ọ bụrụ na 30 na 90 na-enyere gị aka ịchọta 60 na-enyere gị aka site na nke ọ bụla n'ime ha, ọ ga-eme ka ị na-akwado XNUMX.
Akwụkwọ a na-enye gị ohere ịdebe aha gị na ndị na-ebi ndụ na ebe obibi nke Arab Emirates ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya.
Visa de trabajo: ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ na nke Emiratos Arara Unidos nke ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
(Ntuziaka: dị ka ihe ọ bụla nke na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-edebere gị ozi)
Achọrọ ka ị na-eme ya Emiratos Árabes Unidos:
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere 6 ozi ọma, ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-aga.
Ọ bụrụ na ị maara nke ọma, ego na laboral en su país de origen que garantice que usted volverá al mismo en caso de ser necesario.
Debe tener suficiente dinero para su estadía en los Emiratos Árabes Unidos, el cual na-ekesa nke ọma n'etiti las actividades que desea realizar junto con el sito en donde se va hospedar.
(Nkọwa: ihe ọmụma nke onye isi obodo na-enyere gị aka na a webpage nke Minista Minista nke Asuntos nke Extremeres nke United Arab Emirates ma ọ bụrụ na ị na-agụnye aha).
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-emepụta ya.
Ọ dịghị ihe ọ bụla ị na-ebugharị nke anụmanụ nke ahịhịa na-echebe site na-ele anya.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka osisi, osisi, mmanụ, na osisi na osisi na-acha ọcha.
Salida de los United Arab Emirates: Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọ bụla chọrọ, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ.
Achọrọ gị na trabajar en los Emiratos Árabes Unidos
En el caso de que usted quiera encontrar un empleo y vivir los United Arab Emirates ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ onye na-akwado ozi ọma.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị mkpa, .
Ọ bụrụ na ị na-achọ na-ezigara akwụkwọ ozi gị na ndị ọbịa, ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe atọ dị iche iche na-adịbeghị anya site na nke mbụ oge, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ọhụrụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụrụ na ị na-abanye gị na bancaria, registrar un vehículo, entre otras.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-emekọ ihe ọnụ.
Al aceptar algún puesto de trabajo en los United Arab Emirates, na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke na-enyere ndị ọzọ aka, na-enyere ndị na-akwụ ụgwọ na-eme ka ha na ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla.
En el caso que usted sea una de los extranjeros cualificados por los emiratos y sea contractado por alguna nna especialista o por alguna multinacional, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, :
Ihe ọ bụla na-enyere gị aka na-eme ka a na-enyere gị aka ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara gị anya.
Ọ na-enyere gị aka ịbanye na alquiler de algún vehículo que usted necesite para trasladarse en el país.
Otu atụmatụ nke ụgwọ ezumike nká na-adabere na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ, ị ga-ahụ na Abu-Dhabi.
Ihe ọ bụla na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-echekwa ihe ọ bụla ị nwere ike ime ka gị na ndị ezinụlọ gị na-enyere gị aka na ezinụlọ.
Enyere na nke nkerecerán dos nkepos de contractos na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na a na-emekarị nke 4, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị naanị XNUMX arụ ọrụ.
N'ịbụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na-emekọ ihe ọnụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ha de adaptación para que tenga buenos frutos en el país.
Ọ bụrụ na ị na-eleba anya na nke 8 na-eme ka ndị mmadụ na-eleba anya na nke 5, ọ bụ nanị ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ na nke 6 nke XNUMX bụ nke jornada laboral, reservando el viernes el cual es el dena na utiliz de descanso.
Ọ bụrụ na ị na-eche na Ramadán na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọchịchị, ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị na-abụghị ndị Kraịst na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa ka ị na-eme ihe ọ bụla, Ụmụnna na-eme ka ọ dị mkpa.
A na-eme ka ndị ọzọ na-enyere gị aka ịbanye na EAU
En los últimos tiempos conseguir un Buen trabajo en EAU na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe dị mma, na-eme ka a na-eme ka ha na-eleba anya na 15 na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-eme ihe ha na-eme. ihe ndị ọzọ na-adabere na ndị ọzọ na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe, ma ọ bụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ internet.
Ihe ndị ọzọ na-eme ka ị na-enweta na EAU
Na-ekwu okwu ebe obibi na EAU ndị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe dị iche iche na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ụmụ mmadụ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla.
Akwụkwọ akụkọ a na-emepụta ihe na-egosi na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị nwere ike ịbanye na ịntanetị, ị nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla dị na ya na internet, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ịntanetị Bacante na-eme ka anyị wepụta pueda cubrer.
Esos sitios que le ayudaran a conseguir las ultimas vacantes por internet puede ser mediante las agencias de reclutamiento, na anuncios de trabajos que nkerece una site na LinkedIn, na ụlọ ọrụ na dijitalụ nke ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla.
Nke a na-akọwa ihe dị iche iche na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị mkpa ma na-eme ka ihe ọ bụla na-aga n'ihu na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla na cualquier ma ọ bụrụ na ị na-achọ.
Mee ka ị nweta CV maka ịkpụ akwụkwọ
A na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye a na-eme ka ọ bụrụ onye na-enwe mmasị na CV (nke a na-ahụ anya), el cual es la clave fundamental that le ayudara a conseguir un na-enweta ego na EAU y en cualquier otro país del mundo en donde desee.
En el cual puede que se tenga que adaptar en cada aplicación, nke onye ọ bụla na el mismo usted deberá destacar de forma clara cuáles nwa sus habilidades y experiencias anteriores que lo hacen ser el mejor candidato en algún puesto en particular que tenga available laresa .
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na ndị ọzọ na ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ, na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na ndị ọzọ na-achịkwa, dị ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ, con lo siguiente:
Ọ bụrụ na ị chọrọ, na-enyere gị aka na-enyere gị aka ịbanye na ekwentị gị na ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ka anyị na ndị ọzọ na-emekọ ihe, na-eme ka anyị na ndị ọzọ na-emekọ ihe.
Ighachite onwe gi: na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe dị iche iche na-eme ka a na-eme ihe ndị dị na pocas palabras.
Ọ bụrụ na ị maliteghachi: ebe a na-enyere gị aka iji na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mkpa ka ha
Una experiencia relevante que haya tenido: aquí es conde deberá colocar un pequeño historial de su trabajo o de algún trabajo que haya tenido, el cual deberá ser colocado de forma breve para que el reclutador lo ra rápidamente y se sienta atraído por lo que lee.
Sus logros: aquí es donde deberá colocar si en alguna de sus experiencias laborales anteriores fue nombrado como empleado del mes y por cuanto tiempo lo fue, con la finalidad de na-enyere gị aka ị na-eche na ị na-eche na ị nwere ike ịbanye na ụlọ ọrụ nke ụlọ gị enwe mmetụta n'ihu.
Ha na-eduzi: aquí deberá colocar sus últimos estudios realizados na na algunas onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ha na-eme ka a na-emepụta ihe na 15 años, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na-akwado ha.
Sus na-akwado: ị nwere ike na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha na-elebara anya na onye ọ bụla.
Cheta na-ekwu, sị: nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka onye ọ bụla na-elekọta ụlọ, dị ka onye ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na 7 na 10 segundos nke XNUMX na XNUMX na-eme ka a CV, ọ na-eme ka ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-enweghị ihe ọ bụla
Aunque no crea las cartas de presentación son una de las herramientas dị ka ọ dị ugbu a na-enyocha usoro na EAU ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe dị iche iche na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla.
La echiche de la misma es que el empleador puede encontrar en una carta lo que está buscando para poder llenar la vacante que tiene available, es por eso que lo primero que deberá colocar en la misma es su último empleo junto con sus funciones, preferiblemente en ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọwa ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị ka ndị na-eduzi ụgbọala na ụlọ ha, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị mmadụ na- y la misma muestre su interés.
Ihe nzuzo na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na nke CV na-enweghị ihe ọ bụla na-enyere gị aka ịbanye na EAU, ị nwere ike ịbanye na gị na mgbasa ozi dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya los concejos anteriores que le mencionamos.
Ihe ọmụma na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ihe, na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla dị ka el CV en laresa, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ike na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ ya, ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla?
Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ha na-eme ihe n'ezie na-enweghị ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla tiempo na duro trabajando en la misma.
Ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla.
El conseguir un buen empleo en EAU es muy sencillo en realidad, solo usunder debe hacer un buen brothers de las herramientas que puede utilizar para ello, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ịbubata na nke a n'ezie.
¿Cuánto mere a trabajador promedio in Dubaii? ¿Cómo conseguir mejores ingresos?
Dentro de los empleos que se pueden en Dubái exist la gran duda de ¿Cuánto es lo que se puede ganar un trabajador promedioỌ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-eche na ị na-elebara anya dị iche iche dị iche iche na ọ dịghị adabere na nke ụlọ ọrụ na-akwado ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na- ya sea por contratación de una empresa o porque decidiste ir hasta Ọ bụrụ na ị na-eme ya.
Factores que afectar la ganancia de un trabajador promedio en Dubái
Dentro de los factores dis comunes que consuegras que afectan directamente el cuanto puede ganar un trabajador promedio N'elu, a na-eme ihe dị iche iche dị ka ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-aga n'ihu:
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ na nke a na-emekarị na Dubái y en todo el Medio Oriente, a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eleta anya, nke a na-eme ka ọ dị mfe, Nke a bụ nkọwa nke la siguiente manera:
Ihe ndi ozo.
Western europeos occidentales.
Los rusos que forman parte de los europeos del este.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe kasị mma na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eduzi ya, ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-awụ na a ciudad.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enwe ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụ ihe dị mkpa na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, a diferencia que las que no Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme otú ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, dị ka a na-akwụ ụgwọ ego na ego na ego.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị ugbu a, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ nke na-eme ka ọ bụrụ na ha tinye aka na 20% más.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa na ya, trabajando y siguiendo sus normas.
Sueldos y salarios na puede ganar un trabajador promedio en Dubái
Sabiendo ya cuales son los factores que pueden afectar la cantidad de ganancia que puede ganar un trabajador promedio N'ọtụtụ ụbọchị, a na-eme ihe dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ha na-emekọ ihe.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ, na-eme ka a na-akpọ EAU (DEDA) EAU (AED), na-eme ka a na-eme ihe banyere mba America (USA) ) y el euro, las cuales son las siguientes:
1 Dirhams EAU (AED) bụ otu ụlọ ọrụ 0,27283 maka ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ, na-achọpụta na ị nwere ike ịmepụta 3,67320 Dirhams EAU (AED).
1 Dirhams EAU (AED) bụ otu ọnụahịa 0,200367. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ naanị 4,99083 Dirhams EAU (AED)
Ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mfe bụ are nke a na-eme, junto son sus beneficios.
Ihe ọ bụla ị na-eme na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na-enwe mmasị na nkà mmụta ihe ọmụma na-agụnye 13000 ngwa ngwa 20000 Dirhams EAU (AED), bụ nke a na-enweta na indio con las mismas characterist ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ya na 10000 AED.
En el caso que usted tenga una familia de un hijo junto con su esposa, a na aceptable na puede llegar a tener en Dubái esta por el alrededor de los 17000 AED mensuales, en una de las zonas nke ndị ọwụwa anyanwụ nke mba nke ọma remunerados asiática que vive en Marina Dubái.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mkpa, muy alta.
Ọ bụrụ na ị na-emekarị ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na ndị ọzọ Los Angeles na United Arab Emirates, na podrás disfrutar, los cuales por lo general son los siguientes:
A seguro de gastos medicos para los mayores y menores de edad que conformen ị maara nke ọma, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ahụ maka ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-egbochi ya ịgwọ ọrịa ya ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
A na-ele anya na a na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-enyere ndị ọzọ aka site na ndị ọzọ na-eme ka ha na-enweta ihe ha na-eme n'ezinụlọ ha.
Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ, ọ na-agụnye ihe ndị ọzọ, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
25 dís de vacaciones, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na nnabata a.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eme ka ị na-echekwa na ị na-eche na ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ị na-eche na ị nwere ike ị nwere ike ịbanye na ị nwere ike ịbanye na gị na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-enwe ego nke ego na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ, ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị na-enweghị ego na ndị ọzọ na-eme ka a las infraestructuras n'ozuzu ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma, ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-elebara anya na ya, para que lo poco o mucho que ganes te rinda dentro de esta majestuosa ciudad de Dubái.
Ventajas y desventajas de trabajar en Dubái para un expatriado
En los últimos tiempos trabajar en Dubái ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ 15 a na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla na-eme. nuevo camino.
Debido a esto Dubái na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dị ka ọ dị ugbu a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye na-enweghị ihe ọ bụ, na-eme ka a na-eme ihe ndị ọzọ.
Como es la vida en Dubai
Ọ na-eme ka oge na-aga trabajar en Dubái, dị ka ihe dị mkpa na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, nuevo junto con lo que ofrece.
Ọ bụrụ na ị na-eme ya vivir en Dubái nke forma permanentes sin duda alguna será la modernización que posee esta ciudad en todos los sentidos, ya na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa na nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ 7 na-eme ka ọ bụrụ XNUMX na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ XNUMX, .
Ọ bụrụ na ị na-ezigara gị ozi ọma, ọ bụghị naanị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ na ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, Amigos, en cambio si eres soltero no será tan fácil.
Nke a na-emekarị ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ 0 na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka o nwee ike ịbanye na ya disfrutar en algún momento determinado.
Ventajas económicas que le pueden traer a tu vida el trabajar en Dubai
Las ventajas a la hora trabajar en Dubái dị ka ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe dị iche iche dị iche iche na-eme ka a na-eme ka ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta ego na ego.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-aga n'ihu, a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka a na-elebara ha anya dị ka a na-eme ka ha trabajar en Dubái en su vida, tanto personal, profesional y económica:
Los sueldos que se manejan dentro de los trabajadores de Dubái ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị na United States, Canada, Europa na Australia.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla ị na-echefu, ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-arụ ọrụ.
N'ọtụtụ obodo na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ kpamkpam ka ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe.
Enweghị ike ịbanye na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-eme ka ndị ọzọ na-emepụta ihe dị iche iche na ndị na-emepụta ego, na-agụnye ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe banyere alquiler, en el caso de dị ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-akpọ otu expatriado en Dubái, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-enweta ihe a na-eme ka a na-enweta na Europe, why not say that a professor of especialista in an específico, in the case of the mensualmente between 12000 and 18000.
Dị ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-enweghị mmasị na ndị ọzọ, dị ka ndị na-enyere ndị 6000 na 10000 nkwado dị ka ndị na-adịbeghị anya na-enyere ndị ọzọ aka, na-eme ka ha na-eme ihe niile Como salarios base, na-enyere gị aka na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Las vacaciones que manejan en el año son de aproximadamente 54 zuru ezu, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe niile a na-akpọ, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mkpa, ọ ga-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla n'ime ezinụlọ ya na-elekọta ndị ezinụlọ ya. .
Ọ bụrụ na ị na-eji oge a na-agụnye ihe ndị ọzọ na-agụnye ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka a na-eme ihe.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-ezigara gị ozi ọma, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enweghị ike iji ya na-eme ihe iji na-emekọ ihe, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọmụma na-enyere gị aka ịkọwa ozi ọma.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, .
N'etiti ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-enweghị ihe ọ bụla ga-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na-eme.
Las desventajas naanị dị ugbu a trabajar en Dubái ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla nke na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe,
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
El precio del alojamiento en cualquier parte de la ciudad suele ser muy costoso, es por eso que le recomendamos que consiga una empresa en donde le ayuden a pagar una parte de su alquiler o le den una vivienda.
Ọ bụrụ na ị na-emekarị ihe ọ bụla na-emekarị ihe ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe.
En el caso de que usted tenga hijos eduzi na-enyere gị aka na-eme ka a na-enyere gị aka ị na-eche na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-ahụ na ị na-aga ahịa, dándole más gastos adicionales.
Las normas árabes que tienen y que mandtoriamente debes cumplir para que puedas na-adịgide adịgide na-eme ka iwu na-akwado iwu.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla na-adọrọ mmasị ha na omenala.
A na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eduzi ya na ụlọ ọrụ na-eduzi ya na ụlọ ọrụ na-eme ka a nkerece muy buenos beneficios que de seguro na ayudaran.
Nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla.
¿Cuáles son los beneficios y consecuencias para un inmigrante a la hora de trabajar en Dubái?
En los últimos tiempos trabajar en Dubái na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na 80% nke azụmahịa na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eleba anya na Japan.
Dị ka ihe atụ nke a na-ekwu na nke a na-emekarị nke 200 nacionalidades diferentes dentro de las personas que se encuentran trabajando en el, donde nagicamente esto le trae aroltiples beneficios y algunas consecucias que debe asumir desde el momento que decide ndụ ebe a.
Beneficios que puede obtener al trabajar en Dubái como inmigrante
Ugbu a, ọ bụghị naanị ndị na-adịbeghị anya na-adịbeghị anya na-adị ugbu a, dị ka a na-eme ka ndị mmadụ na ndị na-eme ihe na-eme ka ndị na-eme ka ha na-akụ na ndị na-eme ihe, na-eme ka ha bụ nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ nke sus actividades.
Gracias a esto actualmente Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe, nke a na-eme ka a cualquier persona que quiete trabajar en Dubái nke hacerlo junto con una serie de beneficios que mencionaremos a continuation:
Dentro de los benéficos que puede get an inmigrante a la hora de decidir trabajar en Dubái ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla na-eme.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-enyere gị aka na-eme ihe na-adịghị mma, ọ na-adabere na ọ bụghị naanị na nke a na-emekarị na USA, Canada, Europe nke Australia ejerciendo el na na na na na na na na na na.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ha y esperendo lo mejor del mismo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịbeghị anya, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mkpa, este dentro del contrato.
En el caso de las viviendas, mediante el trabajo un inmigrante na consiga un na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ọ bụrụ na ọ bụghị.
Uno nke los beneficios adịghị mkpa dị mkpa ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-enweghị ihe ọ bụla trabajar en Dubái, bụ ndị ọkachamara na ọgwụgwọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka a na-elebara anya, na-eme ka a na-eme otú ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-agwọ ọrịa ma ọ bụ ndị na-enweghị ihe ọ bụla na-agwọ ọrịa, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị iche iche algún momento de emergencias que tenga.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta "ọ maara nke ọma", ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụnye ihe ọmụma nke ọgwụgwọ nke ọgwụgwọ, nke na-eme ka a na-elebara ndị ezinụlọ ya anya, na-eme ka ndị ezinụlọ ha y también incluyen hasta el boleto de avión de todos.
Ọ na-enyere gị aka ịbanye ná mba dị iche iche na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ 1000 euro almas, dị ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na hay muchas más opciones en las que puedes escoger, pero de seguro costaran más.
A na-eleba anya na nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla na-eme, hacen que las calles no sean muy transitables.
Nke a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe ndị a na-eme ka 0,25 euro el elite, porque deberás disponer de una cantidad de aproximadamente 20 euro para llenar el tanque de un 4 × 4, los cuales son los más Ukwu que puedes tener ya que los mismos tienen más capacidad de litros.
Ndụmọdụ ndị a na-elebara anya na a na-eleba anya na mba na Dubai
Así que como puedes observar nwa muchos los beneficios que puedes nwetara a la hora trabajar en Dubái ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị mkpa.
N'ihi ya, a na-emekarị omenala, nke a na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe, omenala, okpukpe na normas na ndị na-ebi ndụ na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla dị na ya. ị na-eme ngwa ngwa sacarte del país.
Nke a na-eme ka a na-eme ka a na-ahụ anya na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị nwa iwumente aplicados dentro del país gracias a la modernización que han tenido en todos los sentidos, ọ bụrụ na ị na-ekwe ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ.
En el caso de las mujeres las mismas nwa exageradamente respetadas dentro de la sociedad na -aba ụba nke na-eme ihe ọ bụla, na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka omenala dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị ya hacer lo que no debia se tenía que atener a las consecucia de sus actos.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-ele anya na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ya en pareja o vivir en pareja con alguien en Dubái.
En Dubái convivir con una persona del sexo opuesto na no sea pariente o esposo o esposa del mismo aga totalmente contra las leyes, dị ka ihe dị mkpa na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ngwa ngwa, dị ka ọ bụrụ na ị na-eche na a eme país con un amigo para que ambos se puedan ayudar en el país y vivir junto en el mismo sitio olvídalo.
Ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-eme ka a na-eduzi ya, ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-ede akwụkwọ nke Gobierno de Dubái, na-eche echiche banyere ihe ndị a na-eme na ya na ndị ọzọ, como de los ma ọ bụrụ na ị na-eche na ha na-eme ka ha na-eme ka ọ bụrụ na ha.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme, trabajo en Dubái, deberá asumir sus normas sobre todo las de comportamiento ya que ellos son muy estrictos con eso y con todo na referente a estema.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-elebara anya, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe dị mkpa karịa ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla, nsogbu.
Dị ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme nke ọma, na-enyere gị aka na-enyere gị aka ka ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ihe ọ bụla, maka nsogbu nke nsogbu. Â¿CÃ³mo comportarse en Dubai?.
¿Cómo conseguir un buen empleo en Dubái? ¿Cuáles nwa los mejores tips y consejos?
Ugbu a, na-eme ihe banyere Emiratos Árabes Unidos al igual que Dubái, gosipụtara n'ụzọ zuru ezu na ọ bụrụ na ọ bụ, lo que ha generado conseguir a buen empleo na nke a dị ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe, mmehie na-abata n'ime ihe ndị ọzọ na-achọpụta na nke a.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme otú ahụ, ọ na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ha bụ 15 años na na na na na na na na na na na na na na na emigrar y buscar un buen empleo y futuro profesional y en diferentes aéreas.
Ntuziaka na ndụmọdụ ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye na nke a
Ntuziaka dị iche iche dị ugbu a dị ka ọ dị ugbu a na-eme ka a na-eme ka a na-aga na a Japan a buen empleo, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị mkpa na debes saber nwa os siguientes na mencionaremos a continuación:
El idioma: ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla dị mkpa na-eme ka ọ dị mkpa ka ha na-eme ihe na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla, dị ka a na-eme nke ọma na nke Emiratos Árabes Unidos el luño que más hablado es el inglés, el Urdu y el Hindú.
Nke a dị oké njọ ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site na nke a adịghị buena vez.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụnye gị online na-adịbeghị anya, ọ bụrụ na ị na-agụ:
Gbasara 90 ozi nchịkọta maka ihe ndị ọzọ.
8 plataformas na-enyere gị aka ịbanye n'etiti ndị ọzọ.
15 na-achọgharị online ugbu a n'ihi na ị na-achọpụta ihe ndị ọzọ.
Titulos de inglés y como prepararlos gratis.
Gbanyere gị na-atụle.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na free.
Na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ na internet.
Gọọmentị Google na-eme ka ọ bụrụ na ị kwadoro echiche.
Ihe ndị ọzọ bụ na debes saber para que Dubai consiga un buen trabajo
La moneda: ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na United Arab Emirates, na-emechi Dírham, na-eme ka ndị ọzọ kwekọrọ na ya na ndị ọzọ na-adịbeghị anya (ego na euro), na-eme ka ọ bụrụ na ha na-elebara anya el cambio de la misma en la que más manejes.
Es miembro de: United Nations, de la Liga Árabe, de la OMC y de la OPEP, na-eme ka ọ bụrụ iwu na-achịkwa, normas y convenios que deben ser acatados dentro del territorio de los míratos y de Dubái.
El nwanne horario que tiene: es el de GMT + 4, ị nwere ike igosi na ị na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ na dijitalụ dijitalụ ma ọ bụrụ na ị na-elebara anya na ihe ndị ọzọ na-ezigara gị na ndị ọzọ.
La economÃa: ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ na 31 na 32 na XNUMX na FMI y el BM, na-eme ka a pụtara na a na-egosi na ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe a na-eme ma ọ bụrụ na ị na-emetụta ya.
Las actividades: ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dịkwuo anya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ dị mfe, ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ozi ọma, n'etiti otras.
Cheta: ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ iwu na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka "Health Card" dị ka a na-emekarị na ya.
La religiÃ³n: ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ okpukpe na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ dị ihe a na-eme, el cristianismo y el hinduismo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere ndị mmadụ aka ịbanye na ebe a na-eme ka a na-enweta ozi ọma na ebe nrụọrụ weebụ, ị na-eme ka a na-eme ihe ndị dị mkpa na-eme ka ndị dị mkpa na ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme. na na na na na na na na na na na na na.
Concejos adicionales na te pueden ayudar al conseguir un buen trabajo en Dubái
Dentro de los concejos adicionales na se pueden conseguir para lograr obtener a buen empleo N'ọtụtụ ebe, ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-elekọta ndị ọrụ na ndị ọzọ.
En las opciones que encontraras rápidamente son las que pertenecen al sector de la construcción o el del turismo sobre todo si quieres ir directamente a Dubái nke Abu Dhabi, nke a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị ya gharas vacantes ofrecen a su vez.
En el caso de los trabajos que se pueden conseguir y que más se destacan como los mejores pagados son los arquitectos, ingenieros y técnicos, los expertos en ventas, marketing y finanzas, na ndị na-elekọta mmanụ na ụlọ ọrụ, na ndị na-elekọta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ de la mano con el teatro y la actuación, las energías alternativas y muchos más.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị na-eme ihe ndekọ na Guinness y demás que dị adị na mundo.
Ebe ọ bụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ na ndị ọzọ a buen empleo En Dubái o en los Emiratos Árabes Unidos, los cuales son los siguientes:
Lista completa de sitbajo na Dubai na-eme ihe
Ọ bụrụ na ị na-eme ka nwa ya na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọtụtụ ndị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka a na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ya sus alrededores.
En donde además no solo puedes encontrar a buen empleo nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mma, na-eche na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla.
Dị ka ndị ọzọ na-enyere ndị mmadụ aka ịbanye na nke ọ bụla, ị na-eji ihe ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-adọrọ mmasị na ozi ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na ha, conocer a poco más del n'elur del trabajo, entre otras cosas más.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ị na-eme ka a na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe dị mkpa .
En el cual el ver que se encuentra disponible y que también se adapta a tus conocimientos profesionales ya tu experiencia podrás rápidamente na ị na-eme ka ị na-agụ, na-eme ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya site na ndị ọzọ.
Dentro de las grande oportunidades que ofrece Na na degir y emprender, existen algunas que se pueden calificar como mejores y peores trabajos, na-adabere na nke ọ bụla na-ekpebi ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweta ihe ọmụma banyere ndị na-enweghị ihe ọmụma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọwa ihe ọmụma banyere ihe ọ bụla dị mkpa na-eme ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-ekpebi ihe ọ bụla ị chọrọ, ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na nke ohere ohere en en cualquier área.
Ihe ọmụma na ị nwere ike ikwu na ị na-atụle ya mejores y peores trabajos dị ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ ozi ọma na ozi ọma, ọ bụghị ihe ọmụma zuru ezu, ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla.
Nke a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-emekọ ihe, deempañe en el mes en comparar con otra no por otras aspectos.
N'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ, ọ bụ onye na-eme ihe dị iche iche nke ndị ahịa.
Ọ bụ ndị ọkachamara na-eme ka ọ bụrụ na ha na-ele anya na nke 500 profesionales, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme nke ọma, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-aga n'ihu na-aga n'ihu:
Ntuziaka nduzi nduzi: nke a na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka a na-emekọ ihe niile nke 100000 na-eme, na-eme ka a zuru ezu nke 75000 na 135000 njirimara.
Ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-elebara anya na ọ bụ petróleo y gas en el país.
Los expertos en marketing: ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe akụkọ, na-enyere gị aka inweta 95000 nhọrọ, ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ahịa ahịa.
Los contables y profesionales de las finanzas: ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-elekọta ndị na-elekọta ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha na-edekọ aha ha, ị nwere ike iwepụta nke 75000 mgbasa ozi, nke na-eme ka ha na 55000 na 90000 na-emekọ ihe.
Ọ bụrụ na ndị ọkachamara na-eduzi ego na ndị ọkachamara na-eduzi ego, a na-eme nke ọma na nke 90000 na-eme ihe, na-eme ka ndị mmadụ na ndị ọzọ na-emekọ ihe, na-eme ka a na-eme ihe, na-eme ka a ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na el país por sus innovaciones.
Los abogados: ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ nke a na-edeba aha, nke a na 60000 nke 106000 na-enyere gị aka ịchọta ndị mmadụ niile na 77000 atụmatụ na-adịghị mkpa na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ ụgbọ ibu.
Los medicos profesionales: ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ especialista, na ọ bụ psicólogos infantiles, na ndị na-enweghị mmasị, obstetras y ginecólogos, n'etiti muchos más.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na ndị ọzọ na-emekọ ihe site na ha na-agụnye nke 74000 na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ọ bụghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị tienen.
Ntuziaka nke banks: ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-elekwasị anya na nke a na-eme ka 70000 na-eme ka ndị ọzọ na-akwado 63000, na-eme ka ihe a na-ekwu banyere ihe a bụ 78000 na a XNUMX njirimara.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ, eletrics na plomeros: ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịbeghị anya, ọ na-eme ka a na-elekwasị anya na nke 62000 na-enyere ndị ọzọ aka.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị nwere ike ịbanye na nke a na 40000 na 68000 usoro, ị nwere ike ịmepụta XNUMX dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eduzi ihe ọ bụla nke na-eduzi ya na-eduzi ya se manejan dentro del país.
Los gerentes TI: nke a na-agbanyeghị na 60000 mgbasa ozi, nke na-emepụta na 50000 na 80000 dị iche iche na-enyere ndị mmadụ aka, na-eme ka ndị ọzọ na-eduzi iwu TI.
Los compradores y comerciantes minoristas: a na-agụnye ihe niile nke 55000 dị ka ndị zuru ezu, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ n'etiti 36000 na 53000 na-enyere ndị mmadụ aka, ọ na-eme ka a na-eme atụmatụ nke alguna marca .
Los actuarios: nke a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka ndị ọzọ na-elebara anya, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-elebara anya site na ndị ọrụ ego nke ego na ego na ego na ego na ego.
Ọ bụrụ na ị na-akwado 55000 ngwa ngwa na-enyere gị aka na-enyere gị aka na 30000 na-enyere gị aka site na 80000 na XNUMX na-enyere gị aka, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ.
Ụgbọ elu ụgbọelu: ma ọ bụrụ na ị na-enweghị ihe ọ bụla na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-eme ka 52000 na-enyere gị aka ịchọta 25000 na 70000 njirimara .
Lee ihe ndị na-emepụta ihe oriri: a na-emepụta ihe niile nke 50000 na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agbakwunye na 25000 na 70000 na-eme ka ndị mmadụ, junto con sus beneficios que correspondence de manera obligatoria según las leyes de Dubái.
Ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ dị iche iche na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ, ndị ọrụ na ndị isi na ndị ọzọ a que estos varíen.
Ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla dị na ya ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, es bastante costosa por diferentes razones.
Lo que hace que los mejores y peores trabajos en Dubai a na-eme ihe dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ya.
Ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-eme ka a na-eche na ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha agha.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-emetụta ihe ọ bụla.
¿Los Emiratos Árabes Unidos nkerecen una amplia gama de deertas laborales? ¿Cuáles son las mejores?
Dentro de la gran variedad de onyinye ọrụ nke dị ugbu a, na-eme ka a na-eme ihe na-ezighị ezi, na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mma.
Esto se deba a que loa vida en los Emiratos Árabes Unidos tienen di ética na trabajo increíblemente nnukwu al igual que una gran variedad dentro de los mismos, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-emekarị nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-elebara anya na-eme ka a na-edebanye aha na a logro que puede tener en ella.
Lista nke mejores ma ọ bụ ihe ọ bụla na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ
Ihe dị mkpa destacas que dentro de las onyinye ọrụ nke ndị Emiratos Arabe, na-adị ugbu a dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-abanye n'eziokwu na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe y su economía.
Las profesiones adịghịs demandadas na aertar laboratories na-eme njem na ndị Emiratos Arabe Unidos, nke a na-ekwu na a continuation:
Ọ bụrụ na ị ga - dị ka nke a na-ebipụta ma ọ bụ na-eme ka a na-emepụta nke ụlọ ọrụ Emirates Airlines, nke a na-eme ka ha na-arụ ọrụ nke International, nke na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha nwere ohere na-ezigara.
Nke a na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-elebara anya na nke a na-elekọta ndị ahịa ego, na-eme ka a na-elebara anya na-eme ka ndị mmadụ na-elebara anya na ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
Ọ bụrụ na ị ga - en el caso de esta oferta laboral sucede que también tiene gran cantidad de vacantes available para los trabajadores financieros, na-ahụ maka ihe ndị dị mkpa, na ndị ọkachamara na ego, na nke a na-enyere ndị mmadụ aka inweta ego.
Ọ na-eme ka ọ dị ugbu a, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ya na ya na-akwụ ụgwọ, dị ka a na-eme.
Nkọwapụta ndị isi: bụ ndị na-eme ka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-enwe obi ụtọ na-eme ka ha na-eme ka ha na-emekarị ihe ọ bụla, na-eme ka a na-eme ka onye ọ bụla n'ime ha na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ bụla na-eme ka ha na-arụ ọrụ na ahịa.
Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma. en el cargo lo mas posible.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-anụ ọkụ n'obi, ị ga - ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-agwa gị ihe ọ bụla ị na-eche na ọ bụghị ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị mkpa, ọ bụghị ihe ọ bụla dị mkpa.
Envid Emiratos bụ Arabes Unidos dị ugbu a ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ dị iche iche na-elebara anya dị ukwuu nke na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme otú ahụ na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla.
El onye ọ bụla na-eme nke ọma: ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-emekarị ihe ọ bụla na-eme, ọ na-eme ka a na-emekarị ihe ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị ugbu a.
Donde na ọ dị mkpa na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ na Emiraos Unraos, dị ka ndị na-eme njem, so los de recepcionistas, botones y el personal de limpieza y mantenimiento.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka a na-eme ka ị na-agụnye ma na-eme ka ị na-eme ka gị na ha na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ka ha na-enwe nsogbu na-eme ka ha CV, n'ihi na ị nwere ike ịbanye.
Ọ bụrụ na ị ga - endo el territorio que contempla los Emiratos Arara Unidos hay un gran atractivo por las onyinye ọrụ dị ka ndị na-eme ihe oriri na ụlọ ahịa, ma ọ bụ ndị na-emepụta ihe, na-eme ka ndị na-adịghị mma na-enweta.
Nke a na-eme ka a na-echekwa na ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, a los ahịa na nwa ya na-eme ka ihe ọ bụla dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ha na-enyere ndị ọzọ aka, abiertos por eso la alta dem de de cocineros, chef y camareros en este país.
El onwe sanitario: na tiene que ver con las onyinye ọrụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha bụ ndị na-adịbeghị anya, na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha .
Ọ bụrụ na ị na-enwe ohere na-eme ka a na-enweta 100000 n'etiti ọgwụ, dị ka ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị ọkachamara na-eme ka ihe dị mkpa site na nchebe nke a na-eme ka a na-elebara anya, ọ bụ ohere ịbanye na ya ndị mmadụ na-eme ihe na-emetụta.
Los obreros de construcción: ezumike nke ọgaranya ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị naanị ya na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-ewu ewu, na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ihe, dị ka ihe dị mkpa, el aislamiento y la parte obodo.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ozi ọma onyinye ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Nke a na-achọpụta na nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-emepụta ihe na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ na-emekarị acepta esa buena oferta de trabajo lo antes posible.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị na-eme onyinye ọrụ na ndị ọzọ, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe dị mma site na nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-enweta ihe onwunwe.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, dị ka ihe ndị a na-eme ka ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ha na-eme otú ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Dị ka ihe atụ na-enyere gị aka ịbanye na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla nke na-eme ihe banyere ndị Emiratos Amara Unidos, na-eme ka gị na ndị ọzọ, na-eme ka ị mara na nke a na-eme nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ dị mma.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na nke Emiratos Amara Unidos, olee ihe ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme?
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ọ bụ ya bụ, Abu Dabi na isi obodo, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras Jaima, Sharjah na Umm al-Qaywayn, isas ciudades ofrecen variedad de trabajos para los emigrantes.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe banyere Emiratos Amara, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị dị ka akụ na ụba, política, cultura, entre otros aspectos más. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ugbu a, ị ga-achọpụta ihe ndị dị ugbu a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ziri ezi, dị ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-echefu ego na-echekwa na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ka ị na-eche banyere ihe ọ bụla ị na-eme, ọ na-enyere gị aka na-eme ka ị na-ahọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka Dubaii Abu Dabi na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ihe ngwa ngwa. Nke a na-emekarị ma ọ bụrụ na ọ na-enyere gị aka na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na ndị ọzọ na-aga ozi ọma.
Ihe ọ bụla ị chọrọ ịmalite na-emepụta ihe ọ bụla na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
N'ọtụtụ oge, ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ha nwee ike ime ka ọ dị mkpa ka ha gbanwee ya na ndị na-eme ihe ike.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eme ka ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka gị na ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-adịghị mma.
A na-eme ihe ndị Emiratos Arabe na-eme ka ha mara mma, dị ka a na-emekarị nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, donde puedes conseguir desde viviendas, hasta licencias para conducir y colegios.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla dị mma, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ma ọ bụ na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na postularnos.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-elebara anya na video vidiyo, nke a na-enyere gị aka na-eme ihe ndị dị mkpa, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ya. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adabere na ndị Emiratos na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla.
A na-enweta ozi ọma nke EAU na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ihe ndị a na-emekarị na weebụ. Nke a na-enyere gị aka ịbanye na gị na ndị ọzọ na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-eme ka a mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya site na a na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na nke a na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịbanye na ya site na Dubia Abu Dhabi na servicios son extremadamente costosos a comparación de otras zonas y países.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-elebara anya na nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-enyere ndị ọzọ aka, na-eme ihe dị iche iche omenala dị ka ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ihe a na-ekwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ya, ọ na-achọ ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ya, al igual que acostarse con alguien na ọ bụghị oké osimiri ka esposa nke direct direct.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga - Emiratos Arara na nwunye, ma ọ bụrụ na ha na-eme ka ihe ọ bụla na-eme, ma ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ha na New York, Singapur, entre otros países más.
A na-arụ ọrụ nke petróleo y gas na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla dị na ya aun más en la misma.
Gracias a estas innovaciones en el mercado laborar, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na a ikpeazụ ikpeazụ, na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike inweta ihe ọ bụla na-eme.
Otro de los puntos a favor que se ha visto con Dubái es que gracias a ellos se puede ver como inversiones a futuros proyectos. Los Emiratos Ihe nkiri ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka a na-agụnye ihe ndị ọzọ, na-egosi na hace años muchas empresas express querido.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-adịghị mma, ọ na-eme ka ha dị iche iche na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe n'ezie na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla.
Los Emiratos na-enyere ndị mmadụ aka ịbanye na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-enyere ha aka ka ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla.
Ahora la idea con esto es ir directamente preparado a las ciudades que de tratajar, por lo que es important destacar que Ndị mmadụ na-eme ihe dị iche iche na ihe ndị dị na mbara igwe na onye ọhụụ na con latulos universitarios y experiencia laborar en el área a solicitar .
A na-ekwu na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-ekwu okwu, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-agụ akwụkwọ, dị ka akwụkwọ akụkọ, gụnyere akwụkwọ akụkọ, gụnyere ndị na-emepụta akwụkwọ, na-eme ka 200 300 euro ndị ikom na ndị mmadụ na ndị ọzọ na-eme njem.
Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka a na-azụ ahịa ya, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ya na ndị mmadụ.
¿Cuál es el procedimiento na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eleba anya na trabajo dentro de EAU?
Para trabajar en los United Arab Emirates asị como en cualquier sitio hay reglas y una serie de requisitos para poder lograr cumplir con las expectativas que solicita casa nna nke patron. Estos procedimientos y filtros hay que tomarlos en serio ya que la mayoría depende de tener los papeles al día.
Ọ bụrụ na ị na-edebanye aha gị na ngalaba na-edebanye aha na akwụkwọ ikike ịdekọ aha gị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, dị ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụ ebe a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-adịghị mma.
Chọrọ na-eme ihe dị oké ọnụ ahịa na EAU
Gaa na ya EAU ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Algunos de estos nwa chọrọ:
Ọ dị oké mkpa ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eleba anya United Arab Emirates bụ ndị na-emekarị nke ọma, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ. El 90% nke nzukọ nzukọ bụ ihe ndị dị mkpa na-agụnye ndị njem nke ndị mmadụ na ndị obodo.
Tener la VISA de trabajo ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka a na-elebara anya na-eme ka a na-eme ka ọ dị mfe, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-ele anya pasaporte vigente para la permanencia en United Arab Emirates y por supuesto de los trabajos que solicites.
Ọ dịghị nsogbu nsogbu nke obodo na-ezigara ndị ọzọ na-ezigara ya bi na EAU ọ dịghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị nsogbu.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mma, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe, Arquitectos, wdg. Estos papeles deben estar notariados por la Embajada de Emiratos Árabe Unidos
Redactar muy bien el Akwụkwọ eji achọ ọrụ eme ka a na-edekọ aha gị akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-ekpebi VISA dị ka ndị ọzọ na ndị ọzọ, Emiratos, ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla nke na-eme ka ọ bụrụ na viva en los Eau O de una empresa para trabajar, ya nke esta forma ellos se hacen responsable de su estancia.
Ọ bụrụ na ị nwere ike Eau nke a na-egosi na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke na ị na-enyere gị aka, ya na na aeropuerto solicitan.
Cir CV a Dubai
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara anya,
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla ị na-enwe, ọ bụ ihe dị mkpa. En los United Arab Emirates nke a na-eme ka ndị ọrụ na-eme ka ndị ọzọ na-achịkwa ndị ọzọ, ndị ọrụ, ndị na-eme ihe ... na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-adabere na ha na-eme ihe.
Aquí te dejamos algunas de las preguntas más frecuentes na las intervistas para que puedas na-akwado tus argumentos y no tomen desprevenido. Recuerda siempre centrarte en lo más basico de tu vida person para proyectarlo.
Gịnị ka ị na-eme?
¿Qué consoces sobre ụlọ ọrụ anyị gị organización?
Gịnị bụ ebe a?
¿Qué es lo más important en tu?
¿Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe?
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga - ebe ọrụ Ọ bụghị onye ọ bụla?
¿Ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe atụ dị otú ahụ? Gịnị ka ị na-eme?
¿Cuáles kere dị ka ya na debilidades ọ na defectos?
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka gị na ndị na-aga ozi ọma?
¿Cómo nwere ike ịchọta ndị ọzọ?
Ọ bụ nsogbu dị ka hayas tenido con algÃºn jefe y que hiciste para solucionarlo
Â¿CuÃ¡l es tu fuente de motivaciÃ³n para trabajar?
Â¿CÃ³mo trabajas bajo presiÃ³n y como enfrentas estas situaciones?
Â¿CuÃ¡l crees que es tu mayor logro profesional ngwa ngwa ahora?
Â¿CuÃ¡les son tus aspiraciones salarial y personal?
Â¿QuÃ © hobby tienes?
Ọ bụ ebe a na-eme ihe?
Â¿QuÃ © podrÃas aportar a nuestra organizaciÃ³n?
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-akọwa ihe ọ bụla ị na-eme, gbanwee ya na ị ga-eme ihe ọ bụla ebe ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya dị ka ndị ọzọ, ị na-eme ihe dị iche iche na-adịgide adịgide.
Destacar tus habilidades mmezi dị ka ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mfe, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ dị ugbu a.
Las empresas establecidas en los United Arab Emirates casi siempre buscan personas del idioma inglÃ © si si saben del Ã¡rabe mejor aun, por lo cual la echiche mbụ dị ka a na-eme ka ọ dị mkpa, ya que en pocos minutos te juegas el todo por el todo para que puedan contractarte.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ihe, asÃ como se adapta el Akwụkwọ eji achọ ọrụ nke a ụlọ ọrụ ụwa nke na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwadebe na ọ dị mkpa, ọ na-adabere na ello el reclutador sabrÃ¡ que tipo de persona eres y si le convienes a la papa.
Conoce como trabaja cada nna ukwu
En las pÃ¡izas web de buscadores de trabajo bụ ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị dị mkpa, na-enyere ha aka ịchọta ndị ọzọ, na-eme ka ọ bụrụ echiche nke otras personas sobre dicha organizaciÃ³n.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ dị mkpa ka ọ dị mkpa ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. N'ezie, anyị na-eme ka anyị na-eme ka anyị na-eme ka anyị na ndị ọzọ na-arụ ọrụ na las Ọganihu United Arab Emirates, na-enweta ihe nkepo nke empleo a las personas de habie español.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enyere gị aka. Ị nwere ike ịchọta ebe a na web site web site, wepụ ihe na-ede ederede na - € œSpanishâ € / para que salgan todas las referencias de empresas cuyo a chọrọ ka ọ bụrụ na ị na-ede Spain.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-emekọ ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mfe, nke EAU. Asé al indagar mas puedes encontrar la informaciÃ³n que necesitabas sobre esa organizaciÃ³n.
Na na na na na na Dubai m na-ekwu ndị EAU necesitan el permiso de trabajo para los emigrantes na-eme ka ndị mmadụ na-eche banyere ihe ọ bụla, dị ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa ịkpọtụrụ na otu onye na-eme ka iwu na-adịghị mma.
Ihe dị mkpa na-eme ka a pesar de los problemas que hay en los demÃ¡s paÃses Ã¡rabes, los Emiratos de rabe bụ ndị na-eme ka ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa na-eme ka ha na-abara ha uru, na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla dị mkpa nke ndị ahịa ahịa internados.
Ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eleba anya na ya na Eau, los requisitos se ponen cada vez müs fuerte para entrar en el paÃs y siempre con la solicitud de permiso de VISA laboral. Ya na en este paÃs los innovaciones son su mÃ¡xima prioridad para convertirse en un centro global de innovació³n.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Dị mkpa connotar na los requisitos son pedidos por ley de los Eau, dị ka ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe dị ka ndị ọzọ na-enyere anyị aka ịbanye na ha.
Así como Dubái es líder en innovaciones y con tecnología de primera de misma manera debemos ser nosotros con cada una de las postulaciones na realicemos a través de los portales web de búsqueda de trabajo, nke a na-eme ka ndị ahịa na-elebara anya na ụlọ ahịa na ndị ọzọ .
¿Es rentable la vida en Dubái? ¿Cualquier na-eme ka ị na-eche banyere ebe a?
Na United Arab Emirates nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị ugbu a, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ, na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-enweghị atụ na Medio Oriente .
A na-agbanye n'ọsọ nke a na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-enyere gị aka ka ị na-eme ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ị emiratos árabes, donde uno de ndị isi es Dubai soro ya Abu Dhabi, n'ezie n'ezie na-ere ụgwọ rentable el migrar a los emiratos es una interrogante de muchos.
Dubai como se menciono es uno de Emiratos n'ime Eau ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị mkpa, dị ka ọ dị ugbu a, n'ezie, ị na-eche banyere ihe ndị a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-elebara anya na-eme ka azụmahịa.
Ọ bụ oge na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ị na-eme ya Dubai, na-eche na ọ bụrụ na, a na-eme ka ị na-eche na ọ bụ na Medio Oriente, ọ dịghị mkpa ka a na-ahụ anya na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-achịkwa ya, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ya.
En el caso de que tu lengua nativa sea el español, ọ dị mkpa na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na mbụ na mbụ (B2 de inglés) na ị nwere ike inweta site na ị Ọ bụrụ na ọ bụ ọkachamara, ọ bụrụ na ị na-agụ B2, ị ga-achọpụta.
En Dubai y gran parte de los Emiratos Arara, dị ka "sponsorice" dị iche iche nke ndị na-achịkwa migratorios, estos se basan en el hecho de que la empresa contractadora aparte de contractar al empleado es la encarga de hacer los tramites de visado y alojamiento; nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na ndị na-achịkwa obodo.
En el caso de los empresarios que desean realizar inversiones dentro de Dubai tiene que tener en cuenta que la política na-achọ na-akwụ ụgwọ na obodo na mpaghara site na mgbasa ozi nke ọma, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla na-eme.
En Dubai ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịbụ ndị na-enyere ndị ọzọ aka site na obodo, na-enyere ndị mmadụ aka ịchọta ndị na-eme ka ha na-eme ka ndị ọzọ na-enyere ndị ọzọ aka, na-eme ka a na-eme ka a na-edebere ndị ọhaneze na ndị isi na ndị na-achịkwa ihe na-adịghị mma. ebe a na-etinye aka na ebe a.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-elekọta ndị mmadụ na ndị mmadụ na ndị mmadụ na ndị obodo ha, ọ bụrụ na ha na-eme ka a na-emekarị ihe omume, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe n'ezie na-achọ a las empresas ma ọ bụrụ na ọ bụ ebe a na-anọghị na ya.
La Demanda de extranjeros profesionales igual sigue siendo una opción para la inmigración a Dubai, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-esite n'ọmụmụ ihe, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-agụnye ndị ọkwọ ụgbọelu, ndị chefs, arquitectos, recepcionistas, ndị na-akpọ ndị mmadụ na ndị ọzọ na-emekọ ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ị ga-enwerịrị ihe ọ bụla dị mkpa na en Dubai bụ ndị na-eme ka a na-eme ihe ndị a na-emekarị, na-eme ka a na-akpọ ndị mmadụ na ndị mmadụ na ndị mmadụ na ndị ọzọ na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla.
Las empresas dedicas al traslado de pasajeros por avión, nwa también algunas de las empresas que generan empleos en los Eau, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-elebara anya n'oge ọ bụla.
Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme, ọ na-egosi na ọ bụghị naanị Dubai na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ, site na nke ndị Emiratos, na-eme ka ihe dị mkpa site na ị na-eme ka ndị mmadụ na ndị ọbịa na ụlọ ọgwụ.
Ihe a na-eme ka a na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-eme ka ihe ọ bụla nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa, na-emekarị ihe ọmụma nke ndị isi solicitados en Dubai, nke a na-emekarị, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adị n'etiti ndị bi n'ógbè ahụ.
N'ihi ya, Dubai bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eleba anya na nke ọ bụla n'ime ndị ahịa na-emepụta ihe, bụ nke a na-emepụta na 49.8% nke ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ngwá ahịa, na-agbaso otu 49.2% na ngalaba ọrụ nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, na-arụ ọrụ ego, actividades financieras y transporte aéreo.
The inflación en los emiratos árabes, ọ bụrụ na nke a na-eme ka a na-atụ anya ya, na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-emeghị eme, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ 2016 1.6 na-akwado 2017 na 2.0 2020 2.2 na XNUMX usoro.
A na-akpọ 2016 mgbasa ozi nke 2018 mgbasa ozi na-eme ka ego dị ukwuu site na nke azụmahịa, na-agbakwunye nke GDP na% 3.0 na 2016 na 0,8, na-enyere ha aka na XNUMX dị ike Ee Eau dị ka a na-eme ka ọ bụrụ na e nwere ihe ọmụma banyere para X 2020 osimiri nke 3.6 puntos.
Estos valores ratifican la solides económica de los países que conforman los emiratos árabes, es escialcial Dubái y Abu Dhabi, dị ka ndị ọsụ ụzọ na-arụ ọrụ, na tecnológico y estructural avel mundial, siendo la tierra prometida de lujos y crecimiento personal y laboral.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ị nwere ike ịbanye na ya, cariño en lugares públicos bụ prohibited.
En estructura social, na-akwalite a la cantidad de inmigrantes que tiene Dubai, ha políticas religiosas, tradicionales y legislativas pụtara tenido na disarse mas mgbanwe na kwekọrọ na otros Emiratos, ma ọ bụrụ na ị na-egbochi ya, na-eche na ọ bụrụ na ị na-echefu ego na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ike inweta respeto con las mismas.
En el caso de las mujeres al momento de estar en topres concurridos, no deben hacer nwanne de mini faldas y escodes pronunciados, hacer nwanne de moderado de joyería. Nunca se recomienda siendo extranjero intentar imitar el uwe uwe nke ndị obodo, ọ bụrụ na ị na-ele anya na-eme ka ndị niile na-aga ahịa na ndị ọzọ.
Oge oge nke establecer contacto laboral a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka a na-eme ihe ndị ọzọ, ọ dịghị ndị gusta el trato impersonal.
Dị ka ihe ọmụma na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eduzi ihe ọ bụla na-akpali akpali, ya na-ere del bụ ndị na-eme ihe banyere ọha na eze; ọ bụ onye na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-elebara onwe ya anya.
Siempre recordemos que las tradiciones sociales y religiosas dị ka ọ dị mkpa, ọ na-adọrọ mmasị na obodo ndị na-anọghị na ya, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
Ndụ na Dubai y en todos los países que conforman na emiratos árabes, ọ na-eme ka ọ dị mma karịa ya sueldos son muy variantes ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dịkwuo mma ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla.
¿Cómo debes elaborar correamente tu Ọmụmụ ihe na-eme ka ị na-enweta ihe ọ bụla na-eme?
Na-abanye n'ime ya na Dubai hay que saber mainmente que el malitegharịa bụ ihe akwụkwọ edemede ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme. Recuerda que los reclutadores solo se toman unos minutos para visualizar el tuyo, así que debes esmerarte.
El Akwụkwọ eji achọ ọrụ ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ihe ọ bụla dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla na-eme, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị na-eme ka anyị na-eche na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla. Independiente de que la na-enye gị ohere iji webata ọhụụ site na nkwado nke ndị ọzọ na-akwadebe maka ihe ndị ọzọ.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụla ozi na-ezigara ozi na-ezigara, dede un URL del Ọmụmụ ihe dijitalụ Nke a bu ihe ndi ozo nke QR para que puedan nye a video nke gi presentación. Ihe ndị ọzọ na-enyere gị aka na-enyere gị aka ka ị na-elebara gị anya.
Ọ bụrụ na ị na-akwado 4 mgbasa ozi na 7, ị ga-achọpụta na ị na-eche banyere XNUMX. usoro ọmụmụ, dị ka el reclutador na-elekwasị anya na ọ dị mkpa nke ị enwe ihe ọhụụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eche na ị na-eche na ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe, ọ ga-eme ka ọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị nwere ike na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ihe ọ bụla na-eme, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echekwa ihe ọ bụla na-eme. Ọ na-achọpụta ihe ndị ọzọ na-eme ka ha na-achọpụta na el reclutador vea lo mejor de ti.
Trata de ser siempre honesto en tu malitegharịa, aunque bụ posible mentir la idea es ser lo más sincero posible, embellecer na hoja bụ ọhụụ ma ọ bụ bueno pero jamás exagerando los atributos y menos colocando ọrụ na jamás hiciste, ya que pueden fácilmente ser verificados y de ser un engaño en los United Arab Emirates puedes ir preso por falsificación.
Todos na Ọmụmụ ihe dị ka ndị na-adịghị mma United Arab Emirates ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ, nke a na-elekọta ndị ọrụ, nke na-eme ka ọrụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Nke a na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mkpa maka ihe a.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya Akwukwo Igbo di iche iche na PDF na WORD na nwa los más usados ​​a nivel mundial. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ na-elebara anya na ndị mmadụ, ọ ga-eme ka obi dị ha ụtọ. Ebe a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mma. Ugbu a, ị ga-ebido:
Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ akụkọ banyere sercilla serbs, ị nwere ike ikwu okwu.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-emekarị nke frases cortas y lenguaje sencillo.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụnye, ọtụtụ varios hechos na varias habilidades resaltante.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị iche iche na-egosi ihe omume como tal de nosotros, pero sin repetir lo del Curriculum.
A na-eme ka a na-eduzi ma ọ bụ na-eduzi ma ọ bụ na-eme ihe iji na-eme ihe n'usoro ihe omume.
Siempre es recomendable incluir una fotografía para que el reclutador pueda recordar más rápido la cara.
Datos onye ọ bụla na-akpọtụrụ. Aunque parezca obvio es important incluir información de números telefónicos de contacto, correo electrónico, ozi ahịa, wdg.
Akwukwo ozi ndi ozo bu ihe ndi ozo n'oru, ebe a na adighi nma ka o nye gi aka ka o nye gi aka.
Ihe ọmụma na-egosi na ị nwere ike ịbanye na para reclutador chọpụta la expériecia en el campo.
Colocar el área de objectivos, es para indicar cuáles son las expectativas salariales, zoro ezo na 5 años, wdg.
El titulo también bụ ihe dị mkpa, aunque normalmente la ignoramos por completo y aquí podemos hacer una carta de presentación en pocas palabras, ọ bụghị. de 10 palabras.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ka a emigrar a países extranjeros dị ka onye ọ bụla nke onye ọ bụla nke na-echere ya. Mmehie na-eme mmehie mbụ ọrụ en el extranjero suele ser el más complicado de conseguir, na-agbanyeghị na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ezigbo ọrụ ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eme ihe ọ bụla na-aga n'ihu, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu redacción del Usoro Ọmụmụ y el cómo preparate para la entrevista de trabajo.
Ọ bụrụ na ị Dubai lee primordial es conocer la situación del ahia oru de esta ciudad, su economía, cultura y costumbres, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị ugbu a na-eme ka a mara ya.
Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na ndị ọkachamara ọkachamara dị ka ndị nna ochie na-achọpụta na ị na-achọ ịchọta, onye na-eme nchọpụta sus actividades económicas y en que se desempeña exactamente. Luego na-eme ka a na-arụ ọrụ Akwụkwọ eji achọ ọrụ na ị nwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya.
Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na-emekarị ihe ọ bụla, ị na-eme ka ị na-eche na ị na-eme ihe ọ bụla. Anyị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ị chọrọ ele anya na Usoro Ọmụmụ nke site na mpụga, haciendo bụ ma ọ bụrụ na ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-aga n'ihu.
Mgbe ọ bịara Dubai Ọ bụrụ na ị chọrọ Akwụkwọ eji achọ ọrụ bụ ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-eme ka ha na-emekọ ihe, na-eme ka ha na-eme ihe ndị a na-eme ka ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
na usoro ọmụmụ a mandar se puede agregar la akwụkwọ edemede Como a Cdd nke QR na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ọ bụla na-egosi na ị na-egosi ihe ọ bụla nke onye ọ bụla nwere, na-eme ka ihe ọ bụla na-enyere gị aka. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ na-eme ka a na-elebara gị anya na nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-enyere gị aka ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara gị anya, formato puedan enviarlo por el correo en WORD.
Ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe, nnukwu internacionales.
La bụ onye chọrọ ajụjụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dịkwuo ná mma usoro ọmụmụ hace la diferencia en comparación con los demás postulados.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa uno de los seleccionados por las organizaciones.
Todos na Ọmụmaatụ nke ọhụrụ na ndị ọzọ na-emepụta ihe ọhụrụ, dị nnọọ ka ọ dị ugbu a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla, dị ka onye ọ bụla na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ihe ọ bụla na-enyere ndị ọzọ aka na-eme ka ha njikwa ihe.
Gịnị ka ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ahịa? ¿Qué tipos de trabajo se pueden conseguir?
Ị nwere ike ịtụkwasị uche gị ihe ị na-eche ma ọ bụrụ na ị na-eche? O ¿Olee ihe ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ya? Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla.
Ugbu a, na-eme ka ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị na-eme ihe na-adịghị mma, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ha na-eme ihe na-eme ka a na-eme ka ha na-atụ egwu.
Trabajos nwere ike ịchọta na EAU
Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla mee ka ezinụlọ.
A na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka a na-enyere ndị ọzọ aka ịbanye na ha na-enyere ha aka ịbanye na ha na-eme ka ha na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-enwe ike ịgbanwe na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ, na-eme ka ọ na-adabere na nke a na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka a na-ekwu. Ebe ọ bụ na m na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ihe dị iche iche na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nke 900 onye a na Dubịi en busca de oportunidades que sus países no le ofrecieron, aquí no exist la ley de un sueldo nnimo, por lo que las empresas na na na na na na na na na na na na na el mismo.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye a na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dịkwuo ego. Sus pagos sonde 200 na 400 euro, si hacemos el cambio de la moneda oficial del país.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, dị ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mkpa.
A diferencia de otros países von Emiratos Árabes Unidos nke na-enweta na condiciones laborales, ya ellos son bastante flexibles en este ámbito, podemos decir que de su diversidad culture se adaptaron a las diferentes condiciones laborales que se desarrollan a su alrededor.
Ihe dị iche iche bụ omenala omenala ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ, na-eme ka a na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ visa na-acha.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụla site na nke ọ bụla na-enyere gị aka na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ndị ọrụ na-eme ihe nkiri, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ya na ndị ọzọ na-emekọ ihe.
Nke a dị mkpa nke na-eme njem na ndị Emiratos Árabes na-enyere ha aka ịbanye na omenala ma na-enyere ndị ọzọ aka, na-elebara anya n'etiti ezinụlọ, empresas y sociedad n'ozuzu.
Puestos de trabajos más solicitados en EAU
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụ onye ọzọ, onye ahụ na-eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Dị ka nke a na Emiratos Árabe Unidos. Ebe ọ bụ na ị na-edepụta nke los nkeicios más buscados.
Ezigbo especialistas bụ ihe kacha mkpa ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ ruo mgbe ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-achọ ya. Na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ, ị nwere ike ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-enyere gị aka ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche banyere gị web site.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na 21 a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta XNUMX a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ onye ọ na-enweghị ka ọ dị ya mma. ọ bụ.
Dị ka ihe atụ, nke a na-eme ihe banyere 21 años, mmehie na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-akwụ ụgwọ, hay puntos para ellos en los que pueden encarcelarte por sustancias ilícitas, entonces por ello es que siempre recomendamos estudiar un poco esta cultura y sus tradiciones para que no los tomen por sorpresa.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eche echiche banyere ihe ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na-akwado ihe omume nke Usoro Ọmụmụ na-enyere gị aka na-enyere gị aka ịchọta ndị na-enyere gị aka ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-enyere gị aka. postulantes.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-achịkwa ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-achịkwa ya, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe dị iche iche, nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla necesitaba.
Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ Ọmụmụ ihe na-eme ka ị na-eche na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-edina ụdị onwe gị, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe.
Independiente que trabaje para una empresa pueden deportar a persona por homosexualidad, aunque en Dubái existes discotecas de ambiente el resto hay na estar pendiente solo para no perder el trabajo que se acaba de obtener.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịgide adịgide, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ya decida retirarse del país por configeto.
Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ, ị ga-eme ka ị na-agụ akwụkwọ akụkọ, cortos, na ozi ọma na-eme ka ha na ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme.
Añadirle el na nke ọ bụla nke QR y carta onwe onye na a na-agụ akwụkwọ Ọmụmụ ihe Vitae na toque que faltaba para que el analista pueda tomarte en cuenta y fortalecer ese vínculo con una foto seria donde pueda asociar na ozi na na na na na na na na na na na na na .
Ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọmụma na-agụnye ihe omume dị iche iche na Usoro Akwụkwọ Ọmụma nke na-adịghị mma na ndị ọkachamara na-enyere ndị ọzọ aka ịbanye na nke ọ bụla n'ime ha na-eme ka ha na-eme ihe ndị ọzọ, gụnyere a na-eme ka ha na-eme ka ha viaje sin sorpresa alguna.
¿Cuáles son las compañías más exitosas en Dubái? ¿Cuál es el processimiento para poder trabajar en ellas?
Los Emiratos Árabes na 7 na-eme atụmatụ nke a na-enyere ndị mmadụ aka na-eme ka ha na-emepụta ihe dị iche iche, dị ka a na-elebara anya na mmanụ ụlọ mmanụ na gas. Pero muchos puestos aun siguen siendo buscados por estas empresas para buscar candidatos que sean extranjeros.
O bu ihe ndi ozo na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi ozo na ndi ozo na ndi mmadu na-achota ha na ndi mmadu.
En el mercado económico y laboral hay muchos campos, lo recomendable es ir por uno que llame la atención y pueda dirigirme a uno de esos expertos que indican como que se debe continuar. Nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị ka ASP que es el que lleva un control de las marcas más reconocidas de los países árabes, nyere ha aka na-enweta ihe nchebe nke na-agụnye nke ọma na ndị na-eme ka ndị na-eme ihe n'usoro, na-echekwa na reggae na apliquen a cada uno.
Ọ bụ ebe a na-eme ihe ndị dị na Emiratos Árabes son organizaciones dị ka a na-emepụta nke a na-emepụta ihe ọ bụla nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla na-akwado ya ebe a.
La Mayoría de las empresas que son las más renombradas en los Emiratos Árabes se debe a que de apostaron por su creatividad inno innociónón, site na nke 2016 nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ya las empresas más buscadas.
Dubraị na Yorto na Emiratos bụ ndị na-eche banyere Silicón Valey del mundo. El apoyo na-eme ka a na-ahụ maka salud, eduzi, petróleo, gas, transporte na infraestructura site na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-emepụta ihe na-emepụta ihe.
Estos años son momentos muy oportunos para que inversores corporativos apuesten por Na na, dị ka ndị ọzọ na ndị ọzọ dị iche iche dị iche iche na ndị ọzọ dị iche iche na-emepụta ihe dị iche iche na-eme ka a na-eme ihe dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe.
Dị ka nke a echiche site na Eureeca dị ugbu a na-eche na ọ bụrụ na ị na-amalite na-eme n'ọdịnihu, na-enyere gị aka na-aga n'ihu na-enyere gị aka na-eme ka anyị na-eme ka anyị na-eme ka anyị na-ekwu banyere EAU.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-egosi na 70% del sector servicios, echiche ndị kasị mma na-eme ka ndị ọzọ dị mfe.
Algunas empresas reconocidas na EAU nwa Al Jazeera na ọ dịghị es más que una cadena de noticias muy reconocida y es la que principalmente transmite todas las novedades de los sectores del país, ọ dịghị onye ọ bụla nke ndị Emiratos Árabes si no de mayoría de los países árabes en sí.
Una de las líneas aéreas más famosas en Emiratos Árabes es Emirates na na-arụ ọrụ Emirates Group na-eme ka ha na-eme ihe niile na-eme ka ọ bụrụ na ha de Dubái.
Nke a na-enyere gị aka ịbanye na las 10 na-emepụta nke 133 usoro na 77 países na todo el continente hasta el momento, esto hace que sea una de las más grande en todo el medio oriente en terminos de ingresos de flota y pasajeros transportados.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga nke ọma, ị ga-ahụ na nke Los Angeles, San Francisco, Dallas, Fort Wort na Houston. Nke a bụ ụgbọ elu na Airbus y Boeing na ụgbọ elu nke anchos.
N'ịbụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ha na-emekarị ihe, na-eme ka a na-eme ka onye ọ bụla n'ime ha na-elekọta ndị mmadụ na ndị ọzọ na-emekọ ihe. Algunas empresas nwa:
Emaar Njirimara: ma ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-adị n'etiti ndị 37100 iji nweta 390200 mmetụta.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elekọta ụmụ mmadụ, na-akọwa ozi, ego, ego, ndụmọdụ, n'etiti ụmụ mmadụ na ndị ọzọ, na na na na na na Burj Khalifa y el parque temático Sega Republic que está en el Dubái Mall
Mba Nakheel: ọ bụghị onye na-ahazi ma ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị iche iche na-enyere gị aka na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe. Esta empresa fue la encargada de desarrollar las islas representativas de palmeras artificiales. Esta compañía es una filiar de Dubái World.
Esta empresa internacional en los Emiratos Árabes Unidos opera en función al gobierno, na-eleba anya site na ndị ọzọ na ndị mmadụ na ndị mmadụ na ndị mmadụ, ndị na-eme njem, ndị ọbịa, ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ.
Meraas Na-ejide: na-enyere gị aka ịchọta ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha dị iche iche na-eme ka ha dị ọcha ma na-eme ka ha dị ọcha.
Esta empresa es el encargado de desarrollar el Dubái Parques y Resort, dị ka Legoland, las atracciones de Hollywood y el primer parque temático de cine de Bolywood.
Al-Arabiya: Nke a na-eme ka ndị ọzọ na-emepụta ihe na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha na-edepụta 24 horas del día. Ndị na-eme ihe ike na Al-Yazira.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe dị iche iche na-eme ka ndị mmadụ na-eche na ị na-eche na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla na-agbanwe agbanwe.
A na-emepụta ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị na-eme ihe nkiri na-emepụta ihe ndị kasị mkpa na-emepụta ihe banyere Abu Dabi y Dubái. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ihe ọ bụla na-eme.
Gracias al incremento del GIB, nke a na-emepụta nke a na-emepụta nke a na-eme ka ọ bụrụ na nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ Golfo Pérsico, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ dịkwuo anya na Japan.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-elebara anya na ụlọ ọrụ a na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche, ọ bụrụ na ị na-elebara anya n'ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ndị ọzọ, bastante permisiva cuando hablamos de visitantes e inmigrantes.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka a mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme njem, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịbeghị anya, ọ dịbeghị anya.
Ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-emekarị nke Emiratos Árabes, ọ bụrụ na onye ọ bụla na-elebara anya na ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ọ dịghị onye ọ bụla na-enyere ya aka, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mfe nke a bu ihe ndi ozo.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adọrọ mmasị na ya na web site na web site na post, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịbeghị anya, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị na ya.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị ga-eche na ị ga-eleba anya na usoro ihe omume ị na-aga. Igwe nke ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na-acho acho na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu Ọ bụrụ na ị na-emekarị ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ya.
N'ọtụtụ oge na-eme ihe, ¿Trabajar na EAU bụ ebe ọ bụ?
na Eau na-eme ka a dị iche iche nke azụmahịa na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ịga nke ọma. En los últimos años ha aumentado el índice de migración en los Eau bụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
Los países que conforman los Eau ọ bụrụ na ị na-eme ka ego na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla.
Empleo y visa en los Emiratos Árabes
El mayor índice de extradición tinye uche na Dubái y Abu Dhabi ya na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ya Mayor fuente de trabajos. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche echiche banyere ihe ọ bụla ị chọrọ ka ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye na visa, dị ka a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla United Arab Emirates.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka onye ọ bụla na-achọ ka ọ bụrụ na ọ na-esiri ike na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ha nweta ihe ọmụma,nke a na-echekwa a na-eme ihe na-eme ka ha na-achọ.
Ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-enyere gị aka ịbanye na VISA na-enyere gị aka ịbanye n'ụlọ ọrụ na-enyere gị aka ịhụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ. Luego de que ambas parte hayan realizado el acuerdo laboral, ụlọ ọrụ a na-enyocha ikike nlekọta nke visa na nkwado nke nkwado.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweghị ike ịbanye na VISA mmehie gị na ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka a na-achịkwa ya United Arab Emirates ị na-agba mbọ na-atọ atọ
Los europeos tienen mayor facilidad al momento de tramitar la Visa tanto de trabajo como la de turismo, y tiene la comodidad de poder realiza la renovación dentro del Emirato enweghị ihe ọ bụla ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-aga n'ihu na-aga n'ihu.
Consideraciones importantes al viajar a los EAU
Aunque bụ otu ọtụtụ omenala païs na-akpali ndị a na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ dị mfe en los Eau.
Ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ihe a na-eme ka a na-enwetakwa ihe omuma nke ozo nke ozo, siendo un trámite sencillo y rápido para obtener.
La Mayoría de los países que conforman los United Arab Emirates se debe recordar que se conduce por la derecha cediendo el paso hacia el lado izquierdo. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-eche na ọ bụ na-eme ka a na-eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eche na ị na-achọ Dubai y Abu Dhabi na-enyere gị aka na-enyere gị aka, na-eme ka a dị mfe ma ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla.
Ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe; en muchos na prohibición total a los ndị bi na ya, aunque si posees visa turística podrás beber las bebidas alcoholicas dị ka ebe ndị ọzọ na-adịchaghị mma, na-eme ka ndị ọzọ, na-eme ka a na-eme ihe na-adịghị mma.
Ọ bụghị ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla United Arab Emirates y cualquier país en poseer una cuenta bancaria, en el caso de los Eau ihe ọmụma na-enyere gị aka ịchọta ihe ọ bụla na-enye gị ohere iji nweta ihe ọ bụla na-adịgide adịgide. Enweta ego nke 500 euro.
Ọ dịghị ihe ọ bụla cuenta bancaria del país ọ bụghị siempre es un limitante para laboral en los ihe ndị ọzọ na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a 2% gụnyere imports.
A na-echekwa na a na-eme ihe ọ bụla aportes tecnológicos nke existen de países como Eau es de una de más excelentes que existen, nke a dị mkpa nke salubridad a nkwado. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ na ezinụlọ ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị ugbu a, ọ na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya emiratos árabes bụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na-akụziri ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ihe.
na United Arab Emirates está conformado por los siete emiratos: Abu Dhabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Shariah na Umm al-Qaywayn; siendo la capital Abu Dhabi y la siguiente en importancia es Dubai. Ọ bụ ebe a na-anọchite anya ya Eau.
Las políticas de estos son muy parecidas, mmehie embargo, Abu Dhabi ma ọ bụrụ na ị na-echekwa ego na ego na cost Dubai; bụ nke a na-achọpụta na ọ bụ onye na-enweghị ike ịbanye na ọpụrụgwụ extranjeros.
na Eau bụ ndị na-eme ka ndị mmadụ na-elebara anya nke ọma, na-eme ka ha na-enwe mmekọahụ dị ka ndị na-eto eto, na-eme ka a na-elebara anya na ndị ọzọ Emirato, convirtiéndolo en uno de los isi competidores del ahịa ụwa.
Aunque dice que los Emiratos na-adabere na nke na-eme ka ndị ọrụ na mmanụ ụgbọala na n'ezie ma ọ bụ na-eme ka ọ bụla. N'ikwekọ nke a na-eme ka ndị mmadụ na-elebara anya n'etiti ndị na-elebara anya na ndị isi na ndị isi na-arụ ọrụ ọsụ ụzọ na-arụ ọrụ. aporte económico a los Emiratos.
Dị ka ihe atụ a na-eme ka mmekọrịta gị na ndị ọzọ y flujo de capital que tienen los emiratos árabes nkwalite nke nkwado maka iwu nke ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo, na ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo Eau.
El turismo y la industria en construcción representan una de las mayores nchịkọta na nchịkọta ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-esiri ike na ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ onye na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ bụrụ ihe ga-eme n'ọdịnihu abanye públicos. Esto garantiza el crecimiento de los Emiratos dị ka potencia económica n'ụwa nile.
Ọ bụrụ na ị na-eme ya United Arab Emirates ha na-enwetakwa ihe dị ukwuu site na nkà na ụzụ nke ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ nke mmepụta nke mmepụta ngwá ọrụ, na metalurgia, na-emepụta ihe, na-emepụta ihe, na-emepụta ihe, na-emepụta ihe.
na Eau dị iche iche na-ele anya dị iche iche na ndị ọkachamara na-atụgharị uche na nke a na-atụ anya na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-adabere na ya na Qatar, na-eme ka a na-eme ihe dị iche iche na Qatar na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-elekọta mmadụ mmekọrịta, ọfụma emiratos árabes ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ iwu, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ iwu na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla nke na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla.
na Eau nke a na-ekwu banyere ihe ndị a na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka ha na-atụ anya na a na-eme ka ha dị ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka ha na-eme ihe dị iche iche na-eme ka a dị iche iche.
Nweta ohere gị merie Visa na Dubai!!
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ike ide maka lọtrị Visa nke Dubai! Onwere ihe abuo iji choo inweta UAE Visa nke UAE: Jiri Lolo Visa Lottery ichoputa na ntinye aka ole ma ole ma oburu na i tozuru inweta Visa nke Oru aka. Ọpụpụ mba ọzọ ọ bụla, nke na-abụghị onye mba UAE, chọrọ visa nnabata iji biri ma rụọ ọrụ na Dubai. Anyị na lọtrị, ị ga-emeri nke a Mbinye aka ma ọ bụ biiti na-enye gị ohere ọrụ na Dubai!
Ụlọ anyị na-achịkwa:
Otu egwuregwu kwa onye ọrụ
A ga-eme ka ndị na-egwu egwu kwụsị.
Ihe m na-azụ